2014 ~ MM Daily Star
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် အဓမ္မပြုကျင့် ခံခဲ့ရကြောင်း လေ...
အသိဉာဏ်ပိုင်းချို့တဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ စော်ကားခံ...
အလှမယ် မေမြတ်နိုးကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်မှအနိ...
ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော ဗိုလ်မှူး ကျော်စွာဝင်း ၏ ဖြစ်...
လဂျားယန်ကို ကယ်တင်ခြင်း သို့ မဟုတ် .... ခရာဘွမ်ကို...
ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ခေတ်အဆက်ဆက် ကျဆုံးခဲ့သော သူရ...
၀မ်ပေါင် နိုင်ငံတော် (သို့မဟုတ်) စာမတတ် ပေမတတ် တစ်...
နင်အပျိုစစ်ရဲ့လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဆိုဖို့ မ၀...
သူရဲကောင်းတို့ မြန်မာပြည် အပိုင်း (၃)
14:00 အတုယူစရာ 1 comment
အမေကိုလွန်ခဲ့တဲ့၈၇နှစ်က ကျောက်တန်းမှာ ဖခင်ရှေ့နေ ဦးသွယ်
ငယ်စဉ်ကသံလျှင် BOC ကျောင်းမှာနေပါတယ်။
အသက် ၁၃ နှစ် ၇ တန်းမှာ ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တော့
တော်လှန်ရေးသမားတွေကြိုသတင်းပို့ လို့ လွတ်သွားတယ်။
စစ်ပြီးပထမဦးဆုံးစာမေးပွဲစစ်ဖို့ လုပ်တော့ ကျောင်းမှာ ၁၀ တန်း မက်ထရစ်မှာဖြေမဲ့သူမရှိဘူး။
တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ လုပ်တော့အဖေ့အမေနဲ့ အမျိုးတွေကသဘောမတူကြဘူး။
သူတို့ တက္ကသိုလ်အစပိုင်းအတူတက်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးသူတို့ 
အမေကဘွဲ့ ရတော့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာတွဲ၂ခုအီကိုနဲ့ ဘွဲရတယ်။
ဒေါက်တာဦးထွန်းသင်(နောင်ကမ္ဘာဘဏ်ဒုဥက္ကဌ)က CSED ဗဟိုစာရင်းအင်းနှင့်စီးပွားရေးဌာနမှာလူမှုစီးပွားရေးပညာရှင်အနေနဲ့ 
လာလုပ်ဖို့ ခေါ်လို့ ဗဟိုစာရင်းအင်းနှင့်စီးပွားရေးဌာနမှာဝင်တယ်။
တော်လှန်ရေးကောင်စီခေတ်မှာ CSED ဗဟိုစာရင်းအင်းနှင့်စီးပွားရေးဌာနအကြီးအကဲဦးသက်ထွန်းတာဝန်ပေးချက်အရ အမြတ်ခွန်အထူးအရာရှိ အဖြစ် ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူရတယ်။
မိသားစုဝင်များနဲ့ နီးရာလမ်းမတော်လမ်းသစ်အိမ်ရာစခန်းတိုက်၃အခန်း၇ မှာအမေအမည်ဖြင့်အခန်းရယူနေထိုင်ခဲ့တာယနေ့ တိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဖေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကသူငယ်ချင်းလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်သွေးသောက်တွေလေ။
ရဲဘော်၃ကျိပ်ဖွဲ့ တော့နောက်ချန်အဖွဲ့ မှာထောက်လှမ်းရေး
တပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးဖွဲ့ ခိုင်းတယ်။ဖွဲ့ ပြီးတော့အဖေကို
ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းထောင်ဖို့ အတွက်စင်္ကာပူကအင်္ဂလိပ် စစ်ကျောင်းမှာစစ်ပညာသွားသင်ရတယ်။သူတို့ က ကုလားတွေနဲ့ တန်းတူထားကျွေးတယ်။လွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ 
သင်တန်းပြီးလိုမြန်မာပြည်ပြန်ရတော့ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း OTS မှာအရာခံဗိုလ်ဆရာလုပ်ရတယ်။အပတ်စဉ်၁၀အထိပေါ့။သင်တန်းမှာ
ဆရာလုပ်ရင်းဗိုလ်သင်တန်းဖြေတာ ၇ ကြိမ်ဖြေခဲ့ရတယ်။အပတ်စဉ် ၁၁ မှတက်ခွင့်ရတယ်။ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းတော့စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဌာနထောင်ဖို့ 
စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဌာနကနေ ဗဟိုနိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ်ထောင်ဖို့ ဆရာဖြစ်သင်တန်းတက်ရတယ်။
ပထမအသုတ်ပေါ့။အဖေကတိုက်ခိုက်ရေးတပ်မှာချင်း ၂ နဲ့ ၁၀၁ မှာပဲတာဝန်ယူဖူးတယ်။အဖေ့စစ်မှုထမ်းဘ၀မှာခွင့်တစ်ခါမှမယူဘူး
တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ပဒုမ္မာ အရောင်းဆိုင်မှာဝယ်ခွင့်စာအုပ်ရပေမဲ့လိုသလောက်ပဲဝယ်တယ်။
From:__ Thet Tun
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် အဓမ္မပြုကျင့် ခံခဲ့ရကြောင်း လေဒီဂါဂါဖွင့်ဟ
အသက်၂၈နှစ်အရွယ် ရှိပြီဖြစ်သော ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် လေဒီဂါဂါက ၎င်းသည်
အသက်၁၉နှစ်အရွယ်တွင် ၎င်းထက် အသက်အရွယ်များစွာ ကြီးရင့်သည့် ဂီတထုတ်လုပ်
သူတစ်ဦး၏ အဓမ္မပြုကျင့်မှု ခံခဲ့ရသည်ဟု The Howard Stern Show ရေဒီယိုအင်တာဗျူး အစီအစဉ်အတွင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဒေလီးမေးလ်သတင်းစာက ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့
"ကျွန်မဒီပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးကို တလွဲမကုန်ဆုံးစေချင်ပါဘူး။ ပျော်စရာ
ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပဲ ပြောကြရအောင်ပါ" ဟု အဆိုပါရုပ်သံအစီအစဉ်
အတွင်း ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းကို မေးမြန်းရာတွင် လေဒီဂါဂါက ယခုကဲ့သို့
သို့ရာတွင် ရေဒီယိုအသံလွှင့်သူက ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပိုမိုစောင်းပေး မေးမြန်းခဲ့
သောအခါ လေဒီဂါဂါက ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ဖြေကြားခဲ့သည်။
"ကျွန်မအနေနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဒဏ်ရာတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာ
အောင် ကုစားခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အရာတွေက ကျွန်မအတွက် သိပ်ကို
ခါးသီးလှပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒီအကြောင်းအရာတွေ ပြန်တွေးပြီး ရီတောင်ရီ
ချင်ပါတယ်" ဟု ဂါဂါက ပြောသည်။
"ပြောရမယ်ဆိုရင် အဲဒီတုန်းက ကျွန်မအသက် ၁၉နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက
ကျွန်မ အတွေ့အကြုံသိပ်နုနယ်သေးတယ်" ဟု ဂါဂါက ဆိုသည်။ ၎င်းထက် အသက်
၂၀ခန့် ပိုကြီးသော လိင်မှုကျူးလွန်သူ အဆိုပါ ဂီတထုတ်လုပ်သူအား အမည်ထုတ်ဖော်ပြောကြားရန် မေးမြန်းသောအခါ လေဒီဂါဂါက ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
"ဘယ်သူလဲဆိုတာ မပြောချင်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလူနာမည်ကို ထုတ်ဖော်ပြော
လိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ချုပ်နှောင်ထားသလို ခံစားရမှာ စိုးလို့ပါ " ဟု ၎င်းက
မင်းသားတေလာကင်နေးနှင့် တွဲနေသည့် လေဒီဂါဂါသည် ယင်းအဖြစ်အပျက်ကို
မည်သည့်အချိန်တွင်မျှ လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း
စိတ်အတွင်း မျိုသိပ်မနေနိုင်၍ ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
လေဒီဂါဂါက ၎င်းအား အဓမ္မမှုကျူးလွန်ခဲ့သူကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သော်
လည်း အဆိုတော်ကီရှာ၏ရှေ့နေဖြစ်သူက လက်သည်တရားခံသည် ဂီတထုတ်လုပ်သူ
ဒေါက်တာလုခ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များ ပေါ်ထွက်လာသောအခါ
လေဒီဂါဂါ၏ ကိုယ်စားလှယ်များက ယင်းအချက်ကို ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။
အသိဉာဏ်ပိုင်းချို့တဲ့သည့် အမျိုးသမီးများ စော်ကားခံနေရ
12:00 မုဒိန်း မှုများ, နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
အိန္ဒိယတွင် အသိဉာဏ်ပိုင်း ချို့တဲ့သည့် အမျိုးသမီးများသည်
၎င်းတို့အား စောင့်ရှောက်ထားသည့် ဂေဟာများတွင် အခန်းတွင်း သော့ပိတ်ထားပြီး
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခြင်းနှင့် အခြားသော ညှဉ်းပန်းနျိပ်စက်မှုများခံရကာ တိရစ္ဆာန်
ထက်ဆိုးဝါးသည့် အခြေအနေဖြင့်နေထိုင်ရကြောင်း လူ့အခွင့်အရေးစောင့် ကြည့်လေ့
လာရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏ ဒီဖင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည့်အစီရင်ခံစာကဆိုသည်။
အသိဉာဏ်ဗဟုသုတ အားနည်းသူများသည်လည်း လူအများ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံနေ
ရပြီး အရာရာကိုကြောက်ရွံ့နေကြရသလို အများတကာ၏ စွပ်စွဲပြောဆိုမှုများကိုလည်း
ခံနေကြရကြောင်း အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ
'တိရစ္ဆာန်ထက်ဆိုးရွားသည့် ဆက်ဆံမှု'ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည့် ယင်းအစီရင်ခံစာ
သည် ယင်းသို့ပြုမူခံနေရသူ၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်လုပ်ကိုင်နေသည့် အမျိုးသမီးများနှင့်
မိန်းကလေး ၅၂ ဦးကို ဆရာဝန်အယောက် ၁၅၀ အပါအ၀င် မိသားစုဝင်များနှင့်အတူ
တွေ့ဆုံမေး မြန်းရာမှရရှိသည့် အချက်များကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။
NLD ဗဟို ကော်မတီ အစည်း အဝေး တွင် သူရ ဦးရွှေမန်း ကို သမ္မတ တင်မြှောက် ရေး ဆွေးနွေး မည်
11:00 သတင်း2comments
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ၏ ပထမ အကြိမ် ဗဟို ကော်မတီ စတုတ္ထ အကြိမ် အစည်း အဝေး ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၁၄ ရက် များ တွင် ရန်ကုန် မြို့ ၌ ကျင်းပ မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိ သည်။ အစည်း အဝေး တွင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက် ပွဲ နှင့် ပတ်သက် ၍ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ် မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် အား သမ္မတ မဖြစ် နိုင်ရန် တားမြစ် ထား သည့် ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ကို ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ မပြင်ဆင် နိုင်မည် မှာ သေချာ သွားပြီ ဖြစ်၍ NLD အနိုင် ရရှိ လျှင် သမ္မတ အဖြစ် ရွေးချယ် မည့် သူကို ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း NLD ဗဟို အလုပ် အမှုဆောင် တစ်ဦး က ပြောသည်။
NLD ပါတီ တွင် ဒုတိယ ခေါင်းဆောင် ဟူ၍ မရှိ သဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် သမ္မတ မဖြစ် နိုင်လျှင် သမ္မတ ရာထူး အတွက် NLD ပါတီ ဝင် မဟုတ် သူကို တင်မြောက် ကောင်း တင်မြောက် ဖွယ် ရှိကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရ ဦးရွှေမန်း အား သမ္မတ အဖြစ် တင်မြောက် နိုင်ကြောင်း NLD ဗဟို ကော် မတီဝင် ဦးဟံသာ မြင့် က ရိုက်တာ သတင်း ဌာန ကို ပြောကြား ခဲ့ သည်။ ထို သတင်း ထွက်ပေါ် လာပြီး နောက် ဦးဟံသာ မြင့် က သူရ ဦးရွှေမန်း အား သမ္မတ အဖြစ် NLD က တင်မြောက် မည်ဟု အမည် တပ် ၍ ပြောဆို ခြင်း မရှိ ဟု ငြင်း ဆို ခဲ့သည့် အတွက် ရိုက်တာ သတင်း ဌာန က အနည်းငယ် ပြင်ဆင် ခဲ့သော် လည်း အဓိပါယ် ပြောင်းလဲ ခြင်း မရှိ ပါ။ ဦးရွှေမန်း အား သမ္မတ အဖြစ် တင်မြှောက် ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နှင့် ဦးရွှေမန်း တို့ လျှို့ဝှက် အပေး အယူ လုပ်ထား သည် ဟူသော သတင်း များ လည်း ပေါ်ထွက် လာ ခဲ့ပြီး NLD ပါတီ က အပြင်း အထန် ကန့်ကွက် နေသော ပီအာ စနစ် ကို ဦးရွှေမန်း က အခြေခံ ဥပဒေ နှင့် မညီ ဆိုပြီး ရုတ် တရက် ပယ်ချ လိုက်သည့် အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကလည်း ယတိ ပြတ် ငြင်းဆန် ခြင်း မရှိ သဖြင့် အဆိုပါ အယူ အဆ ပိုမို ခိုင်မာ လာ ပါသည်။
သို့သော် လည်း NLD ဗဟို ကော်မတီ ဝင် အများစု မှာ သူရ ဦးရွှေမန်း အား သမ္မတ အဖြစ် တင်မြောက် ရေး ကို သဘော တူ လက်ခံ နိုင်ခြင်း မရှိ ကြောင်း သိရ သည်။ “ဘယ်နှယ် ဗျာ၊ ပြိုင်ဖက် ပါတီ က တစ်သက် လုံး ကိုယ့်ကို နှိပ်ကွပ် လာတဲ့ စစ်တပ် က ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်း ကိုမှ သမ္မတ အဖြစ် တင်မြောက် ရေး ဆို တော့၊ ကျွန်တော် တို့ NLD မှာလဲ လူတော် တွေ ရှိ ပါတယ်။ ဒေါ်စု အရှိန် အဝါ ကြီးမား လွန်း လို့သာ မထင်ပေါ် နိုင်ကြ တာပါ။ ဦးရွှေမန်း လောက် တော့ လုပ်နိုင် ပါတယ်။ ပြော ရရင် လဒ လောက်တော့ ငှက်တိုင်း လှ ပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ ဒေါ်စု ကို ဦးရွှေမန်း က ဘယ်လို ကတိပဲ ပေးပေး၊ သူ သမ္မတ ဖြစ်ပြီးရင် လုပ်ချင် ရာ လုပ်လုိ့ ရတာပဲ၊ ကျွန်တော် တို့က ပါလီမန် ဒီမို ကရေစီ မဟုတ်ဖူး လေ၊ ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ မှာတော့ လွှတ်တော် ထဲမှာ ကိုယ့် ပါတီ က အများစု ဆိုရင် ဝန်ကြီး ချုပ် ကို အချိန် မရွေး အယုံ အကြည် မရှိ အဆို တင် ပြီး ဖြုတ် ချ လို့ ရတယ်။ အခု မြန်မာ နိုင်ငံ စနစ် မှာ လွှတ်တော် က သမ္မတ ကို ရွေး ပေမယ့် သမ္မတ ကို ပြန်ဖြုတ် ဖို့က အင်မတန် ခက် ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန် ကျမှ ဦးရွှေမန်း နဲ့ ကျွန်မ ဒီလို လျှို့ဝှက် သဘော တူညီ ချက်တွေ ရှိ ပါတယ်။ ဒီ သဘော တူညီ ချက်တွေ ကို ချိုးဖောက် နေပါတယ် လို့ ပြောလို့ မရ ဘူး” ဟု NLD ဗဟို ကော်မတီဝင် တစ်ဦး က ပြော သည်။
“ဒါပေမယ့် လည်း ကျွန်တော် တို့ အနေ နဲ့ ဒေါ်စု ကို မလွန်ဆန် နိုင် ပါဘူး။ ဗဟို ကော်မတီ ဝင် အားလုံး သဘော မတူ လဲ ဒေါ်စု က လုပ် ဆိုရင် တော့ လုပ် ရမယ့် သဘော တော့ ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဦးရွှေမန်း ကို သမ္မတ တင်မယ် ဆိုရင် ပါတီ တွင်း စည်းလုံး ညီညွတ် မှု ပြိုကွဲ မှာ တော့ အသေ အချာ ပဲ။ အကြီး အကျယ် နှစ်ခြမ်း ကွဲမယ်” ဟု ၄င်း က ဆိုပါသည်။
“ဒီ အစည်း အဝေး မှာ ဒီ ကိစ္စ ကို အပြတ် ရှင်းမယ် တော့ မထင် ဘူး။ ဘာဖြစ် လို့လဲ ဆိုတော့ ဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်စုရဲ့ သဘောထား ကို လွန်ဆန် နိုင် တဲ့သူ တစ် ယောက် မှ မရှိ ဘူး။ ဒေါ်စု ပြီးရင် NLD ပြီး တယ်။ အာဏာရှင် သဘော မျိုး တော့ မပြော ချင် ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီ အတိုင်း ဖြစ် နေ တာပဲ။ ၂၀၁၀ တုန်း က ဒေါ်စု က မ၀င် ဘူး ဆိုတော့ ၀င်မယ့် ဒေါက်တာ သန်းငြိမ်း တို့၊ ဦး ခင်မောင် ဆွေ တို့၊ ဦးသိန်းညွန့် တို့ ကွဲထွက် သွား တယ်။ ကျန်တဲ့ သူ အကုန် လုံး က NDF ကို သစ္စာ ဖောက် တံဆိပ် ကပ် လိုက်တယ်။ NDF ၂၀၁၀ ရွေးကောက် ပွဲ မှာ နေရာ သိပ် မရတာ NLD ကြောင့် လည်း ပါတယ်။ အခု ပါတီ CEC ထဲ မှာ ဒေါ်စု ကို ပြန်ပြီး ထောက်ပြ နိုင်တာ၊ ထောက်ပြ ရဲတာ ဘယ်သူ ရှိ လို့လဲ။ အရင် တုန်း က ဦးဝင်းတင် က ထောက်တယ်။ ထောက်တော့ သူ သေကာ နီးတောင် ဒေါ်စု က သွား ကြည့်တာ မဟုတ် ဘူး။ နောက်မှ သူများ တွေ တိုက်တွန်း မှ၊ အားလုံး က ၀ိုင်းပြော မှ သွားတာ။ ဒေါ်စု ကို အတိုက် အခံ လုပ်ရင် ခင်ဗျား NLD ပါတီ ထဲမှာ ဘယ်လို မှ နေလို့ မရ ဘူး။ နောက်ဆုံး တော့ သူရ ဦးရွှေမန်း ကို ၂၀၁၅ သမ္မတ လောင်း ကိစ္စ ကလည်း ဒေါ်စု သဘော အတိုင်း ဖြစ်လာ မှာ ပဲ။ မကျေ နပ် ရင် NLD မှာ မနေ နဲ့ လေ နေပြည်တော် အုပ်စု က ပြော လိုက် လိမ့်မယ်” ဟု NLD ပါတီဝင် ဟောင်း တစ်ဦး က ပြော သည်။
NLD ပါတီ အတွင်း ဒေါ်စု ယုံကြည် အားထား ရသည့် နေပြည်တော် အုပ်စု နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ အမြင် တွင် သဘော ထား တင်းမာ သူ များ ဟု သတ် မှတ် ထားဖွယ် ရာ ရှိသည့် ရန်ကုန် အုပ်စု ဟူ၍ (၂) ပိုင်း ကွဲနေသည့် သတင်း များ ထွက်ပေါ် လျက် ရှိ ရာ NLD ပါတီ ဗဟို ကော်မတီ အစည်း အဝေး သည် အဆို ပါ အုပ်စု (၂) စု အကြား ပြင်းထန် သော အားပြိုင်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်လာ နိုင်ကြောင်း၊ နေပြည်တော် အုပ်စု မှာ သူမ နှင့် အနီးကပ် ရှိနေ သူများ ဖြစ်၍ နေပြည်တော် အုပ်စု က အသာစီး ရရှိ သွားဖွယ် ရာ ရှိကြောင်း သတင်း ရရှိ သည်။
From:__ ပြည်သူ့ အာဏာ
အလှမယ် မေမြတ်နိုးကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဘက်မှအနိုင်ပေးလိုက်ပြီ
10:00 အနုပညာလောက သတင်း 1 comment
သရဖူအသိမ်း ခံရသောကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေ မြတ်နိုးကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အနိုင်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မေ မြတ်နိုး၏ေ ပြောကြားချက်အရ သိရ သည်။
''အခုတော့ မြတ်နိုးနိုင်သွားပါ ပြီ။ မြတ်နိုးဘက်က သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲမှာ အမှန်တရားတွေပဲပြောခဲ့ တယ်ဆိုတာကိုလဲJ (Miss Asia Pac- ific World Super Talent Organi- zation rS CEO ) Choi Young Chul က ဝန်ခံလိုက်ပြီ။ ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာလဲ အဲဒီသတင်းက တော် တော်ကို ဟော့ဖြစ်နေပါတယ်''ဟု မေမြတ်နိုးက ဆိုသည်။
မစ္စတာ Choi Young Chul မှာ သရဖူကိစ္စအပါအဝင် တခြားကိစ္စ ရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေမြတ်နိုး ကို တရားစွဲဆိုရန် ပြင်ဆင်နေသူဖြစ် ပြီး လက်ရှိတွင် ယင်းကိစ္စများနှင့် Organization တွင် ငွေကြေးအလွဲ သုံးစားပြုလုပ်မှုများကြောင့်လည်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိFact-Finding Mission မှ စစ်ဆေးမေး မြန်းမှုများပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''သူ့ကို ဘယ်နေ့ကစပြီးတော့ ခေါ်စစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ မြတ်နိုး မသိပါဘူး။ မြတ်နိုးက ဒီဇင် ဘာ ၃ရက်နေ့ကမှ သိရတာပါ''ဟု မေမြတ်နိုးက ပြောသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် Miss Asia Pacific World 2014 အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှ Winner ဆုရှင် အလှမယ်မေမြတ် နိုးကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Miss Asia Pacific World Super Talent Organization မှ သြဂုတ် ၂၇ရက် တွင် သရဖူပြန်လည်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
သရဖူ ပြန်သိမ်းခံခဲ့ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေမြတ်နိုးသည် စက် တင်ဘာ ၂ရက်တွင် သတင်းစာရှင်း လင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆိုပါသတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင် မေမြတ်နိုးအားMiss Asia Pacific World Super Talent Organization မှ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းစေသည့်စကားများ ပြောဆို ခြင်း၊ အသက်မပြည့်သေးသည့် မိန်း ကလေးတစ်ယောက်အား စော်ကား ခြင်း၊ Miss Asia Pacific World သရဖူကို ခိုးယူထွက်ပြေးသည်ဟု စွပ်စွဲခြင်း၊ ဒေါ်လာ ၁၈ဝဝကုန်ကျခံ ပြီး ရင်သားခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားသည်ဟု ပြောဆိုထားခြင်း အစရှိသည့် စွပ်စွဲ ချက်များအား အကျယ်တဝင့် ရှင်း လင်းပြောပြခဲ့ပြီး အဆိုပါပြောဆို ချက်များမှာလည်း မှန်ကန်သည်ဟု Choi Young Chul မှ တာဝန်ရှိသူ များစစ်ဆေးရာတွင် ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း မေမြတ်နိုးက ပြောပြခဲ့သည်။
CEO Choi Young Chul သည် News Networks Korea ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အလှ မယ်ဆုရရှိသူများအတွက် စပွန်ဆာ ရရှိစေရေး၊ စီးပွားရေး၊ လုပ်ငန်းတချို့ နှင့် နိုင်ငံတကာမှ စပွန်ဆာများကို ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းကြောင့် CEO Choi Young Chul ၏ News Networks Korea လုပ်ငန်းအား Fact-Finding Mission မှ ပိတ်ပင်ခဲ့သော်လည်း Choi Young Chul သည် ဝန်ထမ်း မရှိ၊ ရုံးခန်းမရှိဘဲ နိုင်ငံတကာမှ အ လှမယ်များအား လိမ်ညာပြီး စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်အတွက် အင်တာနက် က ဖေးများ၊ မိုတယ်များတွင် ပြောင်းရွှေ့ ၍ လုပ်ငန်းများအား ဆက်လက်လုပ် ကိုင်နေသူ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း Miss Asia Pacific Super Talent of the World မှ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသည်။
Choi Young Chul ၏ ငွေ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းများ၊ Miss Myanmar ၏ သရဖူကိစ္စနှင့် လိင် ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖျော်ဖြေစေခိုင်းခြင်းတို့ ကြောင့် Supertalent of the World ၏ Organization Committee ၏ ဥက္ကဋ္ဌမှ News Networks Korea ၏ CEO Choi Young Chul အား ထိခိုက်နစ်နာသူများ၏ကိုယ်စား တ ရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အ ဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မေမြတ်နိုးကို တာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေး ခဲ့သည့်ြMiss Global Myanmar Organization မှ National Director မလှနုထွန်းအား တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း စက်ပိတ် ထားခြင်းကြောင့် မေးမြန်းခွင့် မရရှိ ခဲ့ပါ။
ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသော ဗိုလ်မှူး ကျော်စွာဝင်း ၏ ဖြစ်စဉ် အကျဉ်း ( ၁ )
09:00 သောက်တစ်လွဲ လုပ်ရပ်များ 1 comment
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်က ရခိုင်ပြည်နယ် တစ်နေရာရှိ အင်ဂျင်နီယာတပ်တစ်ခုပြစ်မှုဖြစ်စဉ်များ
၁။ တပ်သားအဆင့် တစ်ဦး ခွင့်မဲ့ ပျက်ကွက်ဖြစ်သည်မှ အစပြုသည်။
(က) ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ဖြစ်ခြင်းကို (၂၁) ရက်အတွင်း အထက်သို့တင်ပြရမည်ဖြစ်သော်လည်း မည်သို့မှ တင်ပြခြင်းမရှိဘဲ (၆) လ ကျော်သည့်တိုင် အဆိုပါ စစ်သည်၏ လစာ စရိတ်များကို ယင်းကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူသုံးစွဲသည်
(ခ) ခွင့်မဲ့စစ်သည်ကိစ္စကို အရာခံဗိုလ်မှ သတင်းပို့သည့်အခါ ယင်း အရာခံဗိုလ်ကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းပြီး ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုကျင့်သည်
(ဂ) ခွင့်မဲ့ စစ်သည် ပြန်လာသောအခါတွင် မသိသလို ကျိုးကျွံပြုပြီး ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းစေသည်
(ဃ) အဆိုပါ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သည့် စစ်သည်က အရာခံဗိုလ်အား လက်သီးလက်မောင်းတန်း ကြိမ်းဝါးသည်ကို လစ်လျူရှုသည်။
၂။ ပိုမိုကြီးလေးသော ပြစ်မှုများ
(က) အဆိုပါ စစ်သည် ပြန်လာပြီးနောက် တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်စဉ်ညအချိန် ရာခံဗိုလ်ရုံးခန်းအတွင်းဝင်ကာ ရိုက်နှက်ပြီး ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့သည်။
(ဂ) အရာခံဗိုလ်သေဆုံးရသည့်ဖြစ်စဉ်ကို သာမန် မီးလောင်မှုအဖြစ် အထက်ဌာနများသို့ လိမ်လည်တင်ပြသည်။
(ဃ) ယင်း ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်ဖြစ်သည့် စစ်သည် နောက်တစ်ကြိမ် ခွင့်မဲ့ ပျက်ကွက်ဖြစ်သည်။
(င)ဤ ဖြစ်စဉ်ကိုလည်း အထက်ဌာနများသို့ အချိန်နှင့်တပြေးညီတင်ပြခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
(စ)အရာခံဗိုလ်၏ သားဖြစ်သူမှ သည်းမခံနိုင်တော့ဘဲ တိုင်ကြားသည်။
(ဆ) ဤသည်တွင် အထက်ဌာနများမှ ဖြစ်စဉ်ကို သိပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံးဖွဲ့ကာ စစ်ဆေးရန် ပြင်ဦးလွင်တပ်နယ်ရှိ တပ်/ဌာနချုပ် တစ်ခုတွင် တွဲဖက်ပြီးစစ်ဆေးစေတော့သည်။
ပုဒ်မ (၄၃၆) ဖျက်သိမ်းရန်ထောက်ခံကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်အချိန်ကာလ နှင့် နေရာယင်းအား
ပြစ်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလ တွဲဖက်ထားသည့် ပြင်ဦးလွင်တပ်နယ်တွင်ဖြစ်သည်။
>>>အရာခံဗိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းမဲ့ အသတ်ခံရခြင်းအမှုကို ထိန်ချန်သောကျော်စွာဝင်းသည် ယင်း၏ ပြစ်မှုများအတွက် အရေးယူခံရတော့မည်သေချာနေသည့်အချိန် ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံဝတ်၍ လက်မှတ်သွားထိုးလေသည်။
>>>အခြားတစ်ဘက် ပင်းသယောင် ဟန်ဆောင်သည်။
ဖြစ်စဉ်အစအဆုံးကို ကိုယ်တိုင် သုံးသပ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ
ကျော်စွာဝင်းသည် အတော်ပင် ကောက်ကျစ်စွာ ပြုမူသွားသည်၊ ယင်းကိုယ်တိုင် အရေးယူခံရတော့မည် သိသည့်အချိန်ကာလတွင်မှ အခြားတစ်ဘက် ကူးသယောင်ထောက်ခံသယောင်လုပ်သွားသည် ကို ရှင်းရှင်းပြောရလျှင် အရေ၀င်ခြုံခြင်းဖြစ်လေသည်။
ဤသည်ကို မသိနားမလည်သူများက ၀ိုင်းအားပေးချင်အောင် ပုလင်းတူဗူးဆို့များက မြှောက်ပင့်ရေးသားပြီး သူကောင်းပြုနေကြလေသည်။
ထိန်ချန်ထားသည့်ဖြစ်စဉ်မှ ကွယ်လွန်သွားရှာသူ အရာခံဗိုလ်၏ မိသားစုနေရာမှ ၀င်ခံစားပါ။
အရေခြုံပူးသတ်ခံရသည့် ဘက်မှလည်း သေချာတွေးပြီး ကျော်စွာဝင်း ဘယ်လိုလည်း ဆိုသည်ကို စဉ်းစားကြည့်ကြပါကုန်လော့ခင်ဗျာ
သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား/ ကိုယ့်လူ သူ့ဘက်သား ခွဲခြားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
အမြီးမသိခေါင်းမသိ ဘူမသိကိုးမသိ အများယောင်လို့ လိုက်ယောင် အမောင်တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိသူများ အဖြစ်မှ ကင်းလွတ်ကြပါစေသတည်း။
08:00 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
လတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံကို နော်ဝေဘုရင်လာရောက်ပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရှိန်မြှင့်ဖို့တိုက်တွန်းတာမှ ရက်ပိုင်းပင်မရှိသေးပါ။ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖို့ ဆွေးနွေးဖို့ပင်မစရသေးပါ။ ကေအိုင်အေဦးစီးတဲ့ လူတတ်ကြီးတစ်ဖွဲ့က ရွှေဥာဏ်တော်စူးရှပြီးကြေညာချက်အသစ်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို
တောင်ပိုင်းနှင့် မြောက်ပိုင်း ခွဲပြီးစစ်ဇုန်ဒေသသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ မြောက်ပိုင်းကကေအိုင်အေ က ဂွမ်မော် ဦးစီးချုပ်၊ တောင်ပိုင်း က ကေအင်န်ယူကဘောကျော်ဟဲ က ဦးစီးချုပ်ဆိုပြီး
မြန်မာပြည်နှစ်ပိုင်းခွဲဖို့အတွက် မဟာစီမံချက် စတင်လာပါပြီ။
အစိုးရနဲ့တပ်မတော်ကတော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံရေးဘက်ကတစ်သွယ်၊ စစ်ရေးနည်းဖြင့်တစ်ဖုံအမျိုးမျိုးအလျော့ပေးဆက်ဆံခြင်းကြောင့် ရရှိလာတဲ့ယုံကြည်မှုကတော့ အားရစရာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဖြေရှာဖို့ထက် ခွဲထွက်ဖို့ အချိန်ပေးသလိုတောင်ရှိတဲ့သဘောပေါ်လွင်လာပါပြီ။ တပ်ဘက်ကလည်း ခံစစ်အနေအထားဖြင့် နေ့စဉ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များရဲ့ နောက်ကျော ဓားနဲ့ထိုးခံပြီးကျဆုံး၊ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ရဲဘော်တွေလည်းမနည်းလှတော့ပါ။ ဒီလိုလုပ်ရတာတောင် အားမရနိုင်သေးပဲ သူပုန်များစုရုံးပြီး ပြည်ဖျက်ဖို့ထပ်ကြံတော့ ဘယ်သူအလွန်လဲဆိုတာပေါ်လွင်နေပါပြီ။
အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမစမီ၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိစ္စမဆွေးနွေးသေးမီဘာကြောင့် စစ်ဒေသတွေဖွဲ့ စစ်ရေးတပြင်ပြင်လုပ်ပြရပါသလဲ။ မီးစာတစ်ဖက်၊ ရေမှုတ်တစ်ဖက် ရရင်ရ၊ မရရင်ချမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတော့သက်ရောက်နေပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်
ကလည်းကေအင်န်ယူအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကို လက်သင့်မခံကြောင်း အတိအလင်းပြောထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရယူဖို့ရာအစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့် ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်များ တွေ့ဆုံဖြေရှင်းရမယ့် ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပါ။ ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှလည်းဝင်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်ပါ။ ထိုသို့သော အခြေအနေမှာ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ယုံကြည်မှုဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်းထက် တိုင်းရင်းသားများဘက်က ဓားသွေးဖို့ကြိုးစားနေရင်တော့ လက်ဦးမှုယူရတော့မယ့် အခြေအနေဆိုက်ရောက်လာပါပြီ။
တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေတောင်းဆိုနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ဆိုတာလည်း အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အာဏာအကန့်အသတ်ဖြင့် ခွဲဝေဆောင်ရွက်ခွင့်လို့ထင်ထားပေမယ့် လက်နက်ကိုပါမစွန့်လွှတ်ဘဲ ခါးပိုက်ဆောင် တပ်ဖွဲ့ပမာလုပ်ချင်ပြန်တော့ အစိုးရနဲ့ တပ်မတော်သာ အမုန်းခံဝင်မလုပ်ပေးရင် တိုင်းပြည်ပြိုကွဲရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ့်အနေအထား ဖြစ်လာပါပြီ။ မိမိနှင့် အမြင်မကြည်သူ၊ မိမိအပေါ် ရန်လိုဖို့ အမြဲကြိုးစားနေသူကို ဖျောင်းဖျပါတယ်။ မရရင်တော့ ထိပ်တိုက်မတွေ့အောင် ကြိုတင်လက်ဦးမှု ယူထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခြေအနေကို ဆက်ခွင့်လွှတ်နေရင်လည်း အနာဂတ်ကာလ မိမိတို့၏ မျိုးဆက်သစ်သားမြေးမြစ်
များလက်ထက် မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ပုံရိပ် ကမ္ဘာ့မြေပုံပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ အချိန်ပေးပြီးတစ်ဘက်ကို ကြိုးစားခိုင်းမှာလား။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ပြည်ထောင်စုကြီး ရေရှည် တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းသွားမှာလားဆိုတဲ့ ပုစ္ဆာကိုဖြေရှင်းဖို့အချိန်ကျရောက်နေပါပြီ။ ဒီပုစ္ဆာကိုအသာတကြည် အလျော့ပေးမိရင်တော့ နောက်နှစ် ၁၀၀ တိုင်အောင် ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟေ့လို့ ပြည်တွင်းစစ် အကြာဆုံး ဂုဏ်ကိုယူမလား၊ နှစ်အနည်းငယ်ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမလိုလားတဲ့ အာကျယ်နေတဲ့သူတွေကို ကြိုတင် ကာကွယ်ခြင်းသည် ထိရောက်သောကုသမှုဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အတိုင်း လက်ဦးမှုယူပြီး နှိမ်နင်းမလားဆိုတာကို သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပြီ ပြည်သူတွေဘက်ကတော့ အမြဲမီးစိမ်း ပြလျက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
07:00 သတင်း 1 comment
မျိုးစောင့်ဥပဒေကြမ်းများကို ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အများပြည်သူသို့ ချပြခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၃ရက်က ချပြခဲ့သည့် တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြို့ပြနေ လူထုအကြား ကြိုဆို၊ ကန့်ကွက်၊ ဝေဖန်သံများ ညံသွားခဲ့သည်။
တရားဝင်အိမ်ထောင်ရှိလျက်နှင့် ထပ်မံလက်ထပ်ပါက ထိုသူကို ထောင်ခုနစ်နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည်ဟု ယင်းဥပဒေကြမ်းကဆိုသည်။ ယင်းဥပဒေကြမ်းအပေါ် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား၊ ဥပဒေပညာရှင်တို့၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ယနေ့ ပြည်သူ့အသံကဏ္ဍတွင် စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
(ဌာနေကိုယ်စားလှယ်) (Burnet Institute)
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မယားပြိုင်ယူနိုင်တဲ့စနစ်ပဲဖြစ် ဖြစ် အရေးကြီးတာအပြုအမူပါပဲ။ စနစ်တစ်ခုကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေရှိ တာမဟုတ်ဘဲ အပြုအမူကြောင့် ထိခိုက်မှုတွေရှိတာပါ။ ဥပဒေက လူ တွေကိုထိန်းကွပ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြုအမူက မျှတမှုတွေ ထိန်းကွပ်ဖို့အရေးကြီးတာပါ။ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်း တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ရှိမှ HIV တို့၊ AIDS တို့ မကူးစက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး လေ။ ဒီဥပဒေမှာ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်တစ် ခုကို တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ မေတ္တာနဲ့ သစ္စာတရားပြည့်ဝမှသာ အိမ် ထောင်အရည်အသွေးပြည့်ဝမှာပါ။ ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရ ရင် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ လင်ခန်း၊ မယားခန်းကိစ္စတွေမှာပါ သစ္စာနဲ့ မေတ္တာ ပြည့်ဝမှသာ အိမ်ထောင်အရည်အသွေးပြည့်မှာပါ။ ဒီလိုသစ္စာနဲ့ မေတ္တာ မပါတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေအတွက်တော့ ဒီဥပဒေလိုပါတယ်။
ဥပဒေတစ်ခုပြဋ္ဌာန်းတယ်ဆိုတာ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ကို ကြည့်ရတယ်။ ဒီဥပဒေ(တစ်လင်တစ်မယား)က အမှတ်တမဲ့ဆိုရင် ကောင်းတယ်ထင်ရတယ်။ တရားဝင်လက်ထပ်ချင်ရင် ပထမလူကိုကွာ ရမယ်။ ပြီးမှ လက်ထပ်ပေါ့။ အဲဒီလိုမဟုတ်ရင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာရောက် မယ်။ ဒီတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ဥပဒေကိုရှောင်တိမ်းတဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ဥပဒေသဘောအရ ဥပဒေတစ်ခု ဟာ ရှိပြီးသားဥပဒေတွေနဲ့ မဆန့်ကျင်ဘဲ ချိန်ထိုးစဉ်းစားရမယ်လို့ နား လည်သဘောပေါက်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဥပဒေက အကျိုးထက် အဆိုး က ပိုများနိုင်တယ်။ ပထမလူကိုမကွာဘဲ နောက်တစ်အိမ်ထောင်ထူ မယ်ဆိုရင် အဲဒီလူကို ဘယ်သူက တရားလိုလုပ်ပြီး တရားစွဲမှာလဲ။ ရဲအရေး ပိုင်လား၊ ပထမအိမ်ထောင်က တရားလိုလုပ်မှာလား။ တကယ် တမ်း ဒီလိုဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတာထက် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာမှာ အမျိုးသမီးတွေကို ဖိနှိပ်ရာရောက်တဲ့အချက်တွေကိုပြင်ရမှာ။ ဥပမာ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာဥပဒေမှာ မိန်းမတစ်ယောက်က ယောက်ျား ကိုကွာချင်ရင် သုံးနှစ်တိတိစောင့်ပြီး ဒီယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းသက်သေပြမှကွာလို့ရတယ်။ ယောက်ျားကျတော့ ခြောက်လအထိ ဒီမိန်းမက မယားဝတ္တရားမကျေပွန်ဘူး။ သူ့အနားမှာမနေဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းသက်သေပြပြီးရင် ကွာလို့ရတယ်။ ဒါမမျှတဘူး။ ဒါတွေကို ခေတ်နဲ့အညီပြင်ကိုပြင်ရမှာ။ ဒီတစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကိုတော့ ဒီလောက်ပဲပြောချင်တယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ ဥပဒေကြမ်းပဲထွက်ရှိသေးတဲ့အတွက် ပြင်စရာ၊ ဆင်စရာတွေရှိဦးမှာပဲ။ ထပ်ဖြည့်စရာတွေလည်း ကျန်ဦးမှာ ပါ။ ပြီးတော့ နည်းဥပဒေလည်းထွက်ဖို့ကျန်သေးတဲ့အတွက် ဥပဒေမူ ကြမ်းအချောကိုကြည့်ပြီးမှပဲ လက်ခံတယ်၊ လက်မခံဘူးဆုံးဖြတ်သင့်ပါ တယ်။ ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်အထိကျနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ သိပ် မကြိုက်ဘူးဗျ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ မယားအများကြီးယူတဲ့လူက ရှားပါ တယ်ဗျာ။ ဘယ်မြန်မာမှ ပေါ်ပေါ်တင်တင်နှစ်ယောက်ယူတာမှမဟုတ် တာ။ ဒီတော့ မြန်မာမဟုတ်တဲ့ တခြားဘာသာတွေအတွက် ဒီနိုင်ငံမှာ နေရင် ဒီဥပဒေကို လိုက်နာရမယ်လို့ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာပဲဖြစ်မယ်။
ဒီလိုမျိုးဥပဒေထုတ်မှ ပြုပြင်ရတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုအရ လင်ပြိုင်၊ မယား ပြိုင်ဆိုတာတော့ လက်မခံပါဘူး။ အခုလို ဥပဒေထုတ်တာကိုလက်ခံပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနှစ်ယောက် ပေါင်းဖက်တာကို စာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့၊ ဥပဒေတွေနဲ့တော့ မဖြစ်စေချင်တာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အနုပညာကိုချစ်တဲ့လူဆိုတော့ ချစ်ခြင်းတရားကို တန်ဖိုးထားတယ်။ နှလုံးသား ချင်းထပ်တူညီလို့ပေါင်းစပ်မယ့်ဘဝကို ဥပဒေတွေ၊ စာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့တော့ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ ဥပဒေမထွက် လည်း သိနေရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မယားပြိုင်လင်ပြိုင်ယူရင် ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ တရားဝင်နှစ်ယောက်ယူ တာမရှိသလောက်ရှားတယ်။ မယားငယ်ယူတယ်ဆိုတာကလည်း မယားကြီးမသိအောင်ခိုးယူထားတာဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ဖမ်းမလဲ။ တရားဝင်နှစ်ယောက်၊ သုံးယောက် တစ်ပြိုင်တည်းယူထားတယ်ဆိုရင် တော့ ထောင်ခုနစ်နှစ်ချသင့်တယ်။ တရားမဝင်ယူထားတာကို သွားဖမ်း တဲ့အခါကျမှ မဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းလို့ရတယ်လေ။ နောက်တစ်ခုက စပွန် ဆာနဲ့ မွေးစားအဖေလုပ်ထားတာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်လေ။ လက်တွေ့မှာတော့ တရားဝင်မယားငယ်ထားတယ်ဆိုတာ အဆင့် အတန်းနိမ့်ပြီး အများအမြင်မှာ ကဲ့ရဲ့ခံကြရတာများတယ်။
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဆိုတာ ဘာသာရေးအရရော၊ လူမှုရေး ဓလေ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရရောကောင်းတယ်။ ဒီဥပဒေကို သဘောကျ တယ်။ မိန်းကလေးတွေအတွက်လည်း တကယ်ကိုကောင်းတယ်။ တစ် လင်တစ်မယားပဲဆိုရင် လူမှုရေးအရှုပ်အထွေးမရှိတော့ဘူး။ အိမ်ထောင် သည်မဟုတ်ဘဲ သမီးရည်းစားတွေမှာတောင် နောက်တစ်ယောက်ပေါ် လာပြီဆိုရင် ပြဿနာရှိပြီလေ။ အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမင်ရည် စုတ်ထိုးဆိုတာ မလုပ်ခင်ကတည်းက သေချာလေ့လာစဉ်းစားဆုံးဖြတ် ကြရတဲ့အရာတွေပါ။
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်က မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းကိုက်ညီ တယ်။ အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်။ အား နည်းချက်အနေနဲ့ပြောရရင် ဒီဥပဒေသာတကယ်ပေါ်လာခဲ့ရင် အငယ် အနှောင်းထားတဲ့သူတွေလျော့သွားမလား၊ ပိုများလာမလားစိုးရိမ်စရာ ပါ။ လက်မထပ်ဘဲ အတူနေတဲ့သူတွေပိုများလာနိုင်တယ်။ မြန်မာ့ထုံးတမ်း စဉ်လာမှာတော့ တရားဝင်နှစ်ယောက်ယူတာရှားတယ်။ လက်ထပ်ပြီး သားယောက်ျားတစ်ယောက်က နောက်တစ်ယောက်ထပ်ယူဖို့ဆိုတာ တရားဝင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဒီဥပဒေပေါ်လာတာကြိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့လည်း တစ်လင်တစ် မယားစနစ်ဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်း ကိုက်ညီမှုရှိ တယ်လေ။ ဒီဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် တော်တော်တန်တန် အပျော်ရှာချင်တဲ့၊ ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတွေ အတွက်တော့ အထိန်းအကွပ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစု အပေါ် ပိုပြီးတော့ခင်တွယ်စိတ်လေးတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းအပေါ် ပိုပြီးယုံကြည်စိတ် ချလာနိုင်ပါတယ်။
(ဆိုင်းတန်း) (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ၊ မန္တလေးမြို့)
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအပိုင်းနဲ့ကျတော့မညီဘူး။ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံး တမ်းအရဆိုလည်း မကိုက်ညီဘူး။ ရှေးဘုရင်တွေလက်ထက်ကတည်း က မယားပြိုင်ဆိုတာတွေရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိ တယ်။ အခုထိလည်း ဥပဒေတွေမှာ ကျင့်သုံးဆဲပဲ။ အဲဒါကြောင့် အခု ထွက်လာတဲ့ဥပဒေက မြန်မာ့ထုံးတမ်းဥပဒေတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်ရာ၊ မျက်ကွယ်ပြုရာရောက်နေတာကြောင့် သဘောမကျဘူး။ ဒီဥပဒေတွေ ကြောင့် အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင် living together တွေ၊ အမြှောင်တွေပို များလာနိုင်တယ်။ ဥပဒေတွေမှာတော့ အကောင်းအဆိုးအမြဲပဲဒွန်တွဲရှိ နေပေမယ့် ဒီဥပဒေမှာကျတော့ အကောင်းထက် အဆိုးကပိုများနေ တယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်က အိမ်ထောင်ရှိ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို သူနဲ့ငြိစွန်းဖူးပါတယ်ဆိုပြီး ငွေညှစ်တာမျိုးတွေတော့ လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။
ဒီဥပဒေတွေပေါ်ပေါက်လာတာဟာ အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့် ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကနေ တိုက်တွန်းလို့ သမ္မတက ရေးခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုဥပဒေတွေရေးမယ်ဆိုပြီး စဖြစ်ကတည်းက မလုပ်သင့်ဘူးလို့ ကျွန်မ တို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကို ဆက်ပြီးအတည်ပြုမယ်ဆိုရင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးက ပိုများနိုင်တယ်။ မတူညီတဲ့ ဘာသာတွေကြား၊ လူ့အသိုင်း အဝိုင်းတွေကြားမှာ ပြဿနာတွေပိုပြီး တိုးပွားလာနိုင်တယ်။ လက်ထပ် တယ်ဆိုတာ လူမှုရေးအရ ထိခိုက်မခံတဲ့ကိစ္စ။ လူတစ်ဦးချင်းလွတ်လပ် ခွင့်နဲ့လည်း သက်ဆိုင်တယ်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေက နှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပြီးသား။ ကျင့်သုံးခဲ့ပြီးသား။ ဒါကို ဘာသာအားလုံးကို လွှမ်းခြုံပြီး တစ်တန်းတည်းထားလို့တော့ မရဘူး။ ဒီ ဥပဒေလေးခုထဲက တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ ကတော့ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ကောင်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစု လည်း ကြိုဆိုကြမယ်ထင်တယ်။ ယောက်ျားတွေကတော့ ကန့်ကွက်လိမ့် မယ်ထင်တယ်။
ဒီဥပဒေကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိန်းမတစ်ယောက် (ဒါမှမဟုတ်) ယောက်ျားတစ်ယောက်က အိမ်ထောင်ပြုထားရက်နဲ့ နောက်ထပ်အိမ်ထောင်ထပ်ပြုတယ်ဆိုတာ အပျော်ရှာချင်ရုံ၊ ဖောက်ပြန်ချင်ရုံ သက်သက်မဟုတ်ဘဲ တခြားအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပဒေအတည်ပြုဖြစ်သွားရင်တော့ တချို့ကိစ္စတွေမှာ အကျိုးရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအပျော်ရှာချင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ အဟန့် အတားလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့။ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ အားတက်စရာသတင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဆိုတာက တော့ လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ်ကိုယ် တိုင်သေချာစောင့်ထိန်းမှ အဆင်ပြေနိုင်မယ့်ကိစ္စလို့ထင်ပါတယ်။
ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး တကယ်တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖောက် ပြန်တာကိုတော့ ဥပဒေအရ တားနိုင်မယ်မထင်ဘူး။ တစ်ဦးချင်းစီနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ မြို့ပေါ်မှာဆိုရင် အခုလည်း တိတ်တိတ်ပုန်းယူထားတာ တွေ၊ လက်မထပ်ဘဲနဲ့ အတူတူနေတာတွေများကြီးပဲလေ။ အိမ်ထောင် ပြုပြီးသား မိန်းမတွေအတွက်တော့ သူ့အမျိုးသား တရားဝင်နောက်အိမ် ထောင်ပြုမှာ သိပ်မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးပေါ့။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်လည်း သိပ်ထူးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်းပဲသွားနေကြမှာပါပဲ။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအရပဲကြည့်ကြည့်၊ လူ့ကျင့်ဝတ်အရပဲကြည့် ကြည့် ကိုယ့်မှာတရားဝင် ဇနီး၊ သားသမီးပေါ့။ အိမ်ထောင်ရှိလျက်နဲ့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုတာတို့၊ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာတို့က တော့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့မရဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာအရလည်း ဒါက အလေး ထားရမယ်။ ငါးပါးသီလထဲမှာလည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရဆိုတာ ပါပြီး သားပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာ၊ လူ့ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်တာတွေ ကိုတော့ ဥပဒေအရ ပြဋ္ဌာန်းအရေးယူသင့်တယ်။ ဥပဒေဆိုတာတော့ ကြိုက်သူ၊ မကြိုက်သူရှိမှာပဲ။ မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကတော့ ဥပဒေကို ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဥပဒေနဲ့တားလိုက်တော့ နောက်အိမ်ထောင်ပြုတာ မျိုးတွေ၊ ဘာတွေတော့ တော်တော်လျော့နည်းသွားမယ်ထင်တယ်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးက ဒီတစ်လင်တစ်မယားစနစ်ဥပဒေအရ အရေး ယူခံရပြီဆိုရင်လည်း ပြစ်ဒဏ်အကြီးအသေးဆိုတာထက် သူ့ရဲ့စရိုက် သဘာဝ၊ သူ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားကို ဖော်ပြလိုက်သလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် နောက်လူတွေ သင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်တာပေါ့။
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်က အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မိန်းမလေး ယောက်လောက် တရားဝင်ယူခွင့်ပေးထားတဲ့နိုင်ငံတွေက သက်ဆိုင်ရာ ဘုရင်တွေကတောင် စနစ်ပြောင်းပြီး ဒီလိုတစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကျင့် သုံးလာကြပြီ။ ဒီဥပဒေကြောင့် ကွယ်ရာမှာခြေရှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေပိုဖြစ်လာ နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့ လက်ခံနိုင်ဖို့ခက်တယ်။ ခြေရှုပ်တတ်တဲ့သူက တော့ ဥပဒေရှိရှိ၊ မရှိရှိရှုပ်မှာပဲ။
လူမှုရေးအရ၊ လူမျိုးရေးအရကြည့်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်။ ဒီလို တွေရှိလာတော့ ယောက်ျားလေးတွေဘက်ကလည်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရှိလာမယ်လို့ထင်တယ်။ အထူးသဖြင့် ကြားထဲကနေ မြေစာပင်ဖြစ်ပြီး စိတ်ဒဏ်ရာရလာမယ့် ကလေးတွေလျော့နည်းလာမယ်။ တိတ်တိတ်ပုန်း ထားကြတယ်ဆိုတာကတော့ ဒီဥပဒေမရှိတုန်းကလည်း ဖြစ်နေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တရားဝင်အပြိုင်တော့မရှိတော့ဘူး။ အရင်ကဆို တရားဝင် မယား ပြိုင်ယူလို့ရှိရင်လည်း အရင်ယူခဲ့တဲ့ မိန်းမက အရှက်ရတယ်လေ။ ကလေးတွေရှိရင်လည်း ကလေးတွေစိတ်ထဲမှာ အနာတရရှိတာပေါ့။ ဒီလိုသာ ဥပဒေရှိလာရင် တိတ်တိတ်ပုန်းအဆင့်နဲ့ တက်လာလို့မရတော့ဘူး။
လဂျားယန်ကို ကယ်တင်ခြင်း သို့ မဟုတ် .... ခရာဘွမ်ကို သိမ်းပိုက်ခြင်း
21:00 သူ့အတွေး သူ့အမြင်7comments
( Photo - စစ်ကူများ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်သော ...
လဂျားယန် တပ်စခန်း )
တပ်စခန်းတွေ ဆုတ်ပေးဖို့…
သမ္မတ နဲ့ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဆီကို …
အရပ်ဖက် အဖွဲ့ အစည်း ၁၀၀ကျော်က …
စာရေး တောင်းဆိုတယ်လို့ဆိုပါတယ် …
ဒီ အဖွဲ့ အစည်းအများစုက ဘာတွေလဲ …
ဘယ်လို ကျောထောက်နောက်ခံလဲ ဆိုတာတော့ …
ပြန်မေးကြည့် မနေတော့ပါဘူး …
သို့ သော် ….
ဒီ ခရာဘွမ်တောင်ကြောပေါ်မှာ …
တပ်မတော်က စခန်းတွေ …
ဆိုတဲ့ အကြောင်းကိုတော့ …
ဒီ အဖွဲ့ အစည်းတွေ သိမှသိရဲ့ လားလို့…
သံသယ ဖြစ်မိတယ် …
ဇာတ်ကြောင်းကို ပြန်လှန်ရရင် …
လဂျားယန် တပ်စခန်း ကိစ္စက စပါတယ် …
လဂျားယန် စခန်းဟာ …
၁၁၄ မိုင်ရှည်တဲ့....
မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးရဲ့…
လဂျားယန် ရွာလေးဘေးမှာ ရှိတဲ့…
တပ်စခန်း ဖြစ်ပါတယ် …
ဒီ တပ်စခန်းဟာ …
၁၉၉၄ ခုနှစ် ...
ကေအိုင်အေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး မယူခင်ကတည်းက ….
တည်ရှိနေတဲ့တပ်စခန်းပါ …
စခန်းရဲ့ တာဝန်က …
ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီး ရဲ့လုံခြုံရေး ဖြစ်ပါတယ် …
၂၀၁၁ခုနှစ် ဇွန်လနောက်ပိုင်း …
ကေအိုင်အေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပျက်သွားချိန်ကစပြီး …
ဒီပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးဟာ …
ကေအိုင်အေ အဖွဲ့ ရဲ့ ဖြတ်တောက်နှောက်ယှက်ခြင်း …
လမ်းလုံခြုံရေးအတွက် တပ်စွဲထားတဲ့…
ကေအိုင်အေ စခန်း ၃၀ လောက်အထိ …
ပိတ်ဆို့ နေရာယူထားပြီး …
စခန်းကို မလှုပ်နိူင်အောင် ထိန်းချုပ်ခံလာရပါတယ် …
လဂျားယန် စခန်းမှာ ရှိတဲ့ ရိက္ခာဟာ …
၁၅.၁၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့ မှာ …
ကုန်ဆုံးသွားတာက စပါတယ် …
စစ်သည်တွေအားလုံးဟာ ရိက္ခာကို ဆန့် စားနေရပြီး …
စခန်းအပြင်ထွက်တာနဲ့…
ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံရပါတယ် …
ဒီစခန်းကို ရိက္ခာပို့ ဖို့…
စကခ ၃ က ခြေမြန်တပ်ရင်းတစ်ရင်းဟာ …
၂၃.၁၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့ မှာ …
လဂျားယန် တပ်စခန်းကို ချီတက်လာတုန်း …
လမ်းမှာ ခြုံခိုတိုက်ခံရပါတယ် ….
ကေအိုင်အေနဲ့ABSDF …
ပူးပေါင်းအင်အား ၄၀၀ ကျော်က ၀ိုင်းချတာပါ ….
စကခ ၃ က ခြေမြန်တပ်ရင်းဟာ …
အင်မတန်မာတဲ့တပ် ဖြစ်လို့…
Over run တော့ ဖြစ်မသွားပါဘူး …
ဒါပေမယ့်စစ်သည် ၂၁ ဦးကျဆုံး …
၁၃၃ ဦး ဒဏ်ရာရပြီး …
ဖောက်ထွက်လို့ မရဘဲ ပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ် …
ဒီတပ်ကို ဆွဲထုတ်ဖို့…
မြစ်ကြီးနား MI – 35 တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ် …
ပစ်ကူပေး ဆွဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ် ….
ဒီဖြစ်စဉ်မှာ တပ်က အတော်အထိနာသွားခဲ့ပါတယ် …
နောက်ရက်မှာတော့ မပခ တိုင်းမှူးက …
လဂျားယန်ကို ပိတ်ဆို့ ထားတဲ့…
ကေအိုင်အေ တပ်စခန်းတွေအားလုံး ဖယ်ပေးဖို့…
မဖယ်ရင် အင်အားသုံး ဖယ်ရှားမယ်လို့…
တရားဝင် စာနဲ့ အကြောင်းကြားပါတယ် …
ကေအိုင်အေ က …
လုံးဝ အရေးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး ….
အဲဒီမှာ လဂျားယန် စခန်းကို ကယ်တင်ဖို့ အတွက် …
တပ်မ ၈၈ ၊ စကခ ၇ နဲ့စကခ ၂၁ က တပ်တွေ …
လဂျားယန်ကို ချီတက်လာကြပါတယ် …
စချီတက်တာနဲ့…
တိုက်ပွဲတွေ အပြင်းအထန် ဖြစ်ကြပြီး …
တပ်မတော်က ခြေလျင်ခြေမြန် တပ်ရင်းတွေက …
လဂျားယန်ကို ပိတ်ဆို့ ထားတဲ့ကေအိုင်အေစခန်းကုန်းတွေကို …
တစ်ခုပြီး တစ်ခု ရှင်းထုတ်ပြစ်လိုက်ပါတယ် …
လဂျားယန် စခန်းရဲ့ မြောက်ဘက် …
ကိုက်၁၀၀၀ လောက်မှာ ….
လဂျားယန်ကို စိုးမိုးထားတဲ့တောင်ကုန်း …
ပွိုင့် ၇၇၁ ရှိပါတယ် …
ပွိုင့် ၇၇၁ပေါ်ကနေ ...
လဂျားယန်ကို တစ်ချိန်လုံး လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေတော့ …
တပ်တွေက ၃၀.၁၂.၂၀၁၂ ရက်နေ့ မှာ …
ပွိုင့် ၇၇၁ ကိုပါ ၀င်သိမ်းလိုက်ပါတယ် ….
ပွိုင့် ၇၇၁ ကို ပြန်ရဖို့ အတွက် …
ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း ၂၃ နဲ့ABSDFတပ်တွေက …
လက်နက်ကြီး ပစ်ကူကို ….
ပွိုင့် ၁၀၁၂ ခရာဘွမ် တောင်ကြောပေါ်က …
ပွိုင့် ၁၀၁၂ ခရာဘွမ်တောင်ကြောဟာ …
တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ဧရိယာအတွင်းက …
မဟာဗျူဟာမြောက် အမြင့်ဆုံးတောင်ကြောဖြစ်ပြီး …
လက်နက်ကြီး တကမ်း ကောင်းကောင်းမီပါတယ် …
ခရာဘွမ်ပေါ်က ကေအိုင်အေ လက်နက်ကြီးတွေက …
နေ့ ရော ညပါ တစ်ချိန်လုံးဆော်နေတော့ …
ပွိုင့် ၇၇၁ နဲ့အဲဒီနားတစ်ဝိုက်ကုန်းတွေက …
တပ်တွေ ခေါင်းဖော်လို့မရတော့ပါဘူး ….
ဒါနဲ့တပ်တွေက …
ခရာဘွမ်ကို ဆက်တိုက်ပါတယ် …
တိုက်ပွဲဟာ ဇန်န၀ါရီလ တစ်လလုံး …
အပြင်းအထန် ဖြစ်နေတာပါ …
၂၅.၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ မှာ …
ခရာဘွမ် စခန်းကို …
တပ်မတော်က သိမ်းပိုက်လိုက်နိူင်တဲ့ အတွက် …
ပွိုင့် ၇၇၁ ၊ ဖွန်ပြင်ဘွန် တောင်ကုန်း နဲ့…
အခြား တပ်စခန်းတွေအားလုံး ….
ကေအိုင်အေ လက်နက်ကြီးဒဏ်က လွတ်သွားရပါတယ် …
ဘာလို့ တပ်တွေ ရောက်လာရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပါ ….
အခု ဒီနေရာတွေက ပြန်ဆုတ်ပေးဖို့…
ခရာဘွမ်ကို ကေအိုင်အေ လက်ပြန်အပ်ဖို့…
တောင်းဆိုကြတယ် ဆိုတော့လဲ …
ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မတတ်နိူင်ပါဘူး …
မင်းတို့ ဆုတ်တော့လို့အမိန့် ပေးရင် ဆုတ်ရမှာပါ …
ဒီတောင်ကုန်းတွေ ပေါ်မှာ …
ကျွန်တော်တို့စစ်သည်တွေရဲ့အလောင်းတွေ …
အများကြီး မြုပ်ထားခဲ့ရပါတယ် …
သူတို့ အရိုးလေးတွေ ပြန်ဖော်ဖို့ တော့ …
အချိန်လေး ပေးကြပါအုန်း ခင်ဗျာ …. ။ ။
( ရဲမိုး )
20:00 ဆင်ခြင်စရာ, ဗဟုသုတ, ဆောင်းပါး No comments
ခင်ပွန်းဖြစ်သူဆုံးပါးချိန်မှာ မနှင်းဆီ (အမည်လွှဲထား) အသက်က ၂၆ နှစ် ဖြစ်သည်။ အားကိုးရာ မြင်းမိုရ်တောင် ပြိုလဲသွားပြီး နောက်ပိုင်း သားသမီး ၄ ဦးကို ရှာဖွေကျွေးမွေးရမည့် တာဝန်မှာ မုဆိုးမဖြစ်သည့် သူ့ပခုံးပေါ် ကျရောက်လာခဲ့တော့သည်။
ငယ်ရွယ်သူ မုဆိုးမတဦးအတွက် ရွေးချယ်စရာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အနည်းငယ်ထဲကမှ ငွေရလွယ်သည့် ခန္ဓာရင်း၍ စီးပွားရှာသော ညဉ့်ငှက်ဘဝကို မလွှဲမရှောင်သာ သူရွေးချယ်ခဲ့ရသည်။ ဒီလိုနှင့် မနှင်းဆီတယောက် ကလေးမီးဖွားပြီးသည်မှာ ၃ လသာ ရှိသေးသော အချိန်မှာပင် ညဉ့်ငှက်ဘဝကို ဝင်ရောက်ခဲ့တော့သည်။
“ယောကျာ်းမရှိတော့ ရပ်တည်ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီကြားထဲ မိဘတွေကလည်း မပြေ လည်ဘူး။ ကျမသား အငယ်ဆုံး ၃ လသားလေး နို့တိုက်ရင်းကနေပဲ ရပ်ကွက်ထဲက ခေါင်းအိမ်ခေါ် မှာပေါ့နော်၊ ဖောက်သည်တွေ ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့အိမ် မှာ ပုခက်နဲ့ထားခဲ့ပြီး တည်းခိုခန်းတွေ၊ ကေတီဗီတွေ၊ နိုက်ကလပ်တွေမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်” ဟု မနှင်းဆီ က အဝေးကိုငေးကြည့်ရင်း သူ့ဘဝကိုပြောပြသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် မနှင်းဆီတယောက် ညဉ့်ငှက်ဘဝတွင် ၇ နှစ်လောက် ကျင်လည်ဖြတ်သန်းရင်း မိသားစု စားဝတ်နေရေးဘဝကို ဖြေရှင်းရာကနေ တရက်မှာ တော့ ပြည့်တန်ဆာအမှုနဲ့ အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ကျသွားခဲ့သည်။
ထောင်ကလွတ်ပြီးနောက်ပိုင်း သူ့ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ခဲ့ပြီး ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရက်ရှည်ဖျားခြင်း ဝေဒနာများ ၆ လနီးပါး ခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီဝေဒနာတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်း မနှင်းဆီမသိခဲ့ပေ။ အရိုးပေါ် အရေတင်ဘဝဖြင့် အိပ်ရာထဲလဲနေသည့် မနှင်းဆီ အခြေအနေကိုရိပ်မိသည့် အစ်ကိုတဦးက သွေးစစ်ရန် တိုက်တွန်းခဲ့ရာမှ ၂၀ဝ၇ ခုနှစ်တွင် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ သဇင်ဆေးခန်းတွင် သွေးစစ်ခဲ့သည်။
သွေးစစ်မှုအဖြေက သူမကိုယ်ခန္ဓာထဲတွင် HIV ရောဂါပိုး ရောက်ရှိနေကြောင်း အတည်ပြုပေးလိုက်ချိန်မှာ သူမတွင် ရှိနေခဲ့သည့် ကြီးမားသည့် မိခင်မေတ္တာက မနှင်းဆီကို အသက်ဆက်လက်ရှင် သန်စေရန် တွန်းအားဖြစ်လာခဲ့သည်။
“ကျမမှာ ခိုကိုးရာမဲ့ သားသမီး ၄ ယောက်ရှိတယ်။ ဒီကလေးတွေ ပညာတတ်ဖြစ်ဖို့၊ ဒီကလေးတွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရပ်တည်ဖို့အတွက် ကျမ အသက်ရှင်နေဖို့လိုတယ်။ ဒါကြောင့် ကျမ HIV ပိုးထိန်းဆေး (ARV) ဆေးသောက်ချင်တယ်။ သဇင်ဆေးခန်းက ဆရာမတွေကလည်း နားခိုရာဆိုတဲ့ (MDM) အဖွဲ့ဆီကိုညွှန်ပြပေးခဲ့ပြီး အဲဒီကနေ ARV ဆေးရပြီး ပုံမှန်သောက်ခဲ့တာ အခုချိန်အထိပဲ” ဟု မနှင်းဆီကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မနှင်းဆီကဲ့သို့ HIV ကူးစက်ခံရပြီး ပိုးထိန်းဆေးခေါ် ARV ဆေး သောက်သုံးနေသူ အရေအတွက်မှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၆၇၅၀ဝ ကျော် ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၇၅၀ဝ၀ ကျော်အထိ တိုးမြင့်လာကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်း INGO များ၏ စာရင်းများက ဖော်ပြသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် HIV ကူးစက်ခံရသူ တရက်လျှင် ၁၉ ဦးနှုန်း ရှိနေပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွင်း တနိုင်ငံလုံး၌ လူပေါင်း ၆၄၀ဝ ဦး ကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ တနိုင်ငံလုံးတွင် HIV ကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၁၈၅၀ဝ၀ ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အမျိုးသား ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး စီမံချက် (NAP) ၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
HIV ကူးစက်ခံရသူ ၁၀ဝ တွင် မူးယစ်ဆေး ထိုးသွင်းသူ ၃၂ ဦးပါဝင်နေပြီး ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် အများဆုံး ကူးစက်ခံနေရကြောင်း၊ ဒုတိယအများဆုံး မှာ အမျိုးသားချင်း လိင်ဆက်ဆံသူများဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး လိင်လုပ်သားများမှာ တတိယအများဆုံး ကူးစက်ခံနေရသူများဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လိင်အလုပ်သမားများကြား HIV ကူးစက်မှုနှုန်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့က အများဆုံးဖြစ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်မှာ ဒုတိယ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ လိင်တူချစ်သူများအကြား ကူးစက်မှုနှုန်းတွင်လည်း ပုသိမ်မြို့ကအများ ဆုံးဖြစ်ကာ ရန်ကုန်မြို့က ဒုတိယ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၃ NAP အစီရင်ခံစာတွင် ရေးသားထားသည်။
“HIV ကူးစက်မှု လျော့နည်းကျဆင်းဖို့ဆိုရင် ပြည်သူလူထုကို ကျန်းမာရေးအသိပညာ တိုးပွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ မဖြစ်ခင် ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ပညာပေးဖို့ပေါ့။ ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း စနစ်တကျ ကုသပေးမယ်ဆိုရင် HIV ဖြစ်ပွားနှုန်း ကျဆင်းသွားမှာပါ” ဟု HIV ကုသရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေသူ လုပ်သက်ရင့် ဆရာဝန်တဦးက ပြောသည်။
HIV ကူးစက်ခံထားရသူ မနှင်းဆီကမူ အများ ပြည်သူကြားမှာ HIV ၊ AIDA နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးအသိပညာ နည်းပါးနေဆဲဖြစ်ပြီး HIV ကူးစက်ခံရသူတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ ပေါ် ပေါက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း သူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြ သည်။
“ကျမက နေမကောင်းလို့ အင်းစိန်မြို့နယ်ထဲက ဆရာဝန်မတယောက်ဆီ သွားပြတယ်။ ဆရာဝန်မက ကျမကို ဆေးထိုးမလို့ပြင်နေတုန်း ကျမက HIV ပိုးထိန်းဆေးတွေ သောက်နေရတယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ ဒါဆို ရှင့်မှာ HIV ရှိတာပေါ့ဆိုပြီး ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ နောက်ကို ခြေ ၂ လှမ်းလောက် ဆုတ်သွားတယ်။ ဆရာဝန်ကတောင် အဲဒီလို ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေ ခံရပါတယ်” ဟု မနှင်းဆီက ပြောသည်။
သူ ယခင်နေထိုင်ခဲ့သည့် ဒေသတွင်လည်း ညဉ့်ငှက်လုပ်ဖူးပြီး HIV ရလာသူဆိုကာ မိမိတင်မက သားသမီးများကိုပါ ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ကြသဖြင့် တခြားမြို့နယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းကာ ဘဝသစ်စခဲ့ရကြောင်း မနှင်းဆီက ကြေကွဲစွာဆိုသည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရတနာ့မေတ္တာအဖွဲ့မှ ဒေါက်တာစိုးတင့်က “ကျနော်တို့ဆီမှာ ARV ဆေးသောက်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် ဆိုရင်လည်း သူကအဝတ်လျှော်တယ်။ အလုပ်ရှင်တွေက သူ့မှာ HIV ရှိမှန်း သိသွားတဲ့အချိန်မှာ အဝတ်မလျှော်ခိုင်းတော့ပဲ အလုပ်ထုတ်ပစ်တာတွေရှိတယ်” ဟု ပြောပြသည်။
လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏ အထင်သေး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများက HIV ကူးစက်ခံရသူများအတွက် သွေးစစ်မှုခံယူခြင်းနှင့် ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ကြီးမားသည့် အဟန့်အတားတခု ဖြစ်နေကြောင်း HIV၊ AIDS ကုသပေးနေသူ ကျွမ်းကျင်သူများက ပြောဆိုကြသည်။
“ကျမတို့ Sex Worker တွေက ဒီ HIV ဆိုတာကြီးကို လိုချင်လွန်းလို့ ရခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မလိုချင်ဘဲ ရလာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ဒီလူတွေကို ခွဲခြားပစ်လိုက်တာဟာ သေတွင်းကို ပို့လိုက်သလိုပါပဲ။ တကယ်က HIV နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာတွေ လေ့လာပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က HIV ကူးစက်ခံရသူတွေကို ဝိုင်းဝန်းဖေးမ ကူညီပေးသင့်ပါတယ်” ဟု မနှင်းဆီက ပြောသည်။
လတ်တလောတွင် မနှင်းဆီ အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်နေသည်က သူနှင့်ဘဝတူ ညဉ့်ငှက်မလေးများ သူ့လိုမျိုး HIV ကူးစက်မခံရစေရန်နှင့် ကူးစက်ခံထား ရလျှင်လည်း ARV ဆေးသောက်နိုင်ရန် လိုက်လံ စည်းရုံးသည့်အလုပ် ဖြစ်သည်။
“သူတို့ (လိင်အလုပ်သမား) တွေ ရှိတတ်တဲ့ ဆိုင်တွေ၊ ကလပ်တွေ၊ လိင်အလုပ်သမား ခေါင်းအိမ် တွေကိုလိုက်ရှာတယ်။ သူတို့နားလည်အောင် ပြောပြပြီး ကလေးတွေကို စည်းရုံးတယ်။ တခါတလေဆို ကျမတို့အိပ်ချင်တယ်၊ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်၊ စကားလာမပြောပါနဲ့ဆိုပြီး နှင်လွှတ်တာတွေ ခံရတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ ကျမ ကိုယ်တွေ့အဖြစ်အပျက်တွေ ပြောပြပြီး သွေးစစ်ဖို့ စည်းရုံးပါတယ်” ဟု မနှင်းဆီက ပြောပြသည်။
အဆိုပါ ညဉ့်ငှက်မလေးများအား စည်းရုံးပြီး နောက် လှိုင်မြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော သူ အလုပ်လုပ်နေသည့် MDM စင်တာသို့ ခေါ်ဆောင်လာပြီး အခမဲ့ သွေးစစ်ပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ ခံယူစေခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်စေခဲ့ကြောင်း မနှင်းဆီက ဆိုသည်။
“သွေးစစ်ပြီး HIV ရှိလို့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင် ရမှန်းမသိ၊ သေချင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတဲ့ ကလေးတွေဆိုရင် ကျမက ပြောပြပါတယ်။ ငါကလည်း နင့်လို Sex Worker လုပ်ခဲ့သူပါ။ HIV ပိုးရှိလို့ ARV ဆေးသောက်ပြီး ဘဝကို ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ရပ်တည်ရှင်သန် လှုပ်ရှားနေတာလို့ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုပြီး ကိုယ်တွေ့နဲ့ယှဉ်ပြပြီး နှစ်သိမ့်ပေးပါတယ်” ဟု MDM စင်တာ၏ စည်းရုံးရေးသမားလည်းဖြစ်သည့် မနှင်းဆီက ပြောပြသည်။
မာရီစတုပ်၊ ပြည်ကြီးခင်၊ ဆာရာ၊ ရတနာ့ မေတ္တာ၊ သဇင်၊ TOP၊ MDM၊ Phoenix စသည့် နိုင်ငံတကာမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့များနှင့် ပြည်တွင်းမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အနှံ့အပြား တွင် ရုံးခွဲများဖွင့်လှစ်ထားပြီး HIV နှင့် ပတ်သက်၍ သွေးစစ်လိုသူများကို အခမဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ARV ဆေး တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့် HIV ကူးစက်ခံရသူများ စုဝေးပြီး မိတ်ဆုံစကား ပြောခြင်း အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပေးနေကြောင်းသိရ သည်။
HIV နှင့်ပတ်သက်၍ သံသယရှိပါက အဆိုပါ စင်တာများတွင် မည်သူမဆို အခမဲ့သွေးစစ်နိုင်ပြီး သွေးစစ်သူတို့၏ အမည်၊ နေရပ်စသည့် ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များနှင့် သွေးစစ်မှုရလဒ်များကို လုံခြုံစွာ လျှို့ဝှက် ထိန်းသိမ်းထားပေးကြောင်း သိရသည်။
“အမျိုးသမီး လိင်လုပ်သားတွေအနေနဲ့ ဒီလိုစင်တာတွေကို ဆက်သွယ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ စင်တာတွေမှာ လိုအပ်တာတွေအကုန် အခမဲ့ လုပ်ပေးနေပါတယ်။ မဆက်သွယ်တာထက် ဆက်သွယ်တာက သူတို့ဘဝကို ပိုပြီးလုံခြုံအေးချမ်းတဲ့ ဘဝမျိုး ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ” ဟု မနှင်းဆီက ဘဝတူဖြစ်သူများကို အကြံပြုသည်။
မနှင်းဆီကတော့ ဘဝတူ ညဉ့်ငှက်မလေးများကိုလည်း သူ့လိုအခွင့်အရေးမျိုး ရစေလိုသည့် ဆန္ဒဖြင့် သူမကျင်လည်ခဲ့ဖူးသည့် နေရာများစွာကို လျှောက်သွားပြီး ဘဝတူများကို ကူညီပေးနေသည်မှာ ၄ နှစ် ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ရှေ့လျှောက်လည်း ဒီလုပ်ငန်း ကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုဆိုသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ခေတ်အဆက်ဆက် ကျဆုံးခဲ့သော သူရဲကောင်းစစ်သည်များအား ဂါရ၀ပြုပွဲ ကျင်းပမည်
19:00 တပ်မတော် သတင်း, တပ်မတော်သားများ၏ ဘ၀ No comments
လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံစေတီ မြောက်ဘက်မုခ်ရှိ သူရဲကောင်းစစ်သည်ဗိမာန်တွင် ခေတ်အဆက်ဆက်ကျဆုံးခဲ့ရသော တပ်မတော်သားများအား ဂါရ၀ပြုပွဲ တစ်ရပ် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“ဒီလိုပွဲမျိုး လုပ်တာ ကောင်းပါတယ်။ နို့မို့ဆိုရင် တပ်မတော်သားတွေက လူဆိုးဖြစ်ပြီး သောင်းကျန်းသူတွေက သူရဲကောင်းဖြစ်နေတာ။ လွတ်လပ်ရေးရအောင် တိုက်ခိုက်တာ ဒီတပ်မတော်ပဲ။ ခေတ်အဆက်ဆက် သောင်းကျန်းသူတွေ၊ တရုတ်ဖြူတွေ အန္တရာယ်က တိုင်းပြည်ကို ကယ်တင်ပေးခဲ့တာ တပ်မတော်ပဲ။ တပ်မတော်သားတွေ ဒီကနေ့အထိ ဘယ်လောက်သေခဲ့ပြီလဲ။ လူမသိသူမသိ သေခဲ့ရတာတွေ၊ ခြေလက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေ အများကြီးပဲ။ ဒါကို နိုင်ငံရေးသမားတွေက အာဏာရဖို့ သက်သက်နဲ့ အပြစ်တင်တယ်။ စွပ်စွဲတယ်။ NLD လို ပါတီကြီးက သောင်းကျန်းသူဘက်က ရပ်တည်ပြီး တပ်မတော်ကို လက်ညိုးထိုးပြီး စော်ကားတယ်။ ကိုယ်တို့ ရင်နာတယ်။ ခံပြင်းတယ်။ ဒီပွဲကို မရောက် ရောက်အောင်သွားမှာပါ။ စစ်တပ်က နားခဲ့တာ ကြာပြီ ဆိုပေမယ့် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အချိန်မရွေး အသင့်ရှိနေတုန်းပါပဲ” ဟု အသက် ၇၀ ကျော် အရွယ်ရှိ အငြိမ်းစား တပ်ကြပ်ကြီး ဦးကျော်နိုင်က ပြောသည်။
“ဘယ်သူတွေ ဂရုစိုက်ခဲ့လဲ။ တိုင်းပြည်ကို တစ်ကယ်တမ်း ကယ်တင်ခဲ့တာ ဒီတပ်မတော်ပဲ။ ရှေ့တန်းပြန်လာလို့ ပြန်မပါလာရင် တစ်အိမ်လုံး ငိုခဲ့ရတဲ့ တပ်ထဲက သောကတွေ ဘယ်သူ ဂရုစိုက်သလဲ။ ကျွန်တော့် အဖေ တိုက်ပွဲကျသွားတော့ အမေက တစ်အိမ်လုံးကို ဈေးရောင်းပြီး ကျွေးခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဂုဏ်ယူတယ်။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ လိုင်းခန်းချင်းကပ်ရက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို သူ့အဖေ ခြေနှစ်ဖက်လုံး ပြတ်သွားတယ်။ ငိုကြ ယိုကြနဲ့ အနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲနေခဲ့ကြရတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံရေးသမား ဂရုစိုက်ခဲ့သလဲ။ ဒီနေ့ ဒီမိုကရေစီ ရပြီ ဆိုတဲ့အချိန်ရောက်တော့ စစ်တပ်ကို ဆဲတယ်၊ စစ်တပ်ကို ဝေဖန်တယ်။ အခု သောင်းကျန်းသူကို သူရဲကောင်းလုပ် စစ်တပ်ကို ရစရာမရှိအောင် ပြောနေတာတွေ မခံနိုင်ဘူး။ ဒီပွဲကို တစ်မိသားစုလုံး သွားမှာပါ။ ကျွန်တော့်အဖေလို လူမသိသူမသိ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ စစ်သည်တွေအတွက် ကျွန်တော် ဒီပွဲကို ပါဝင်မှာပါ” ဟု ကိုအောင်မြင့်က ဆိုသည်။
“တပ်မတော်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကြောင်းပဲ။ ခွဲလို့မရဘူး။ ဒီကနေ့မှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ သောင်းကျန်းသူတွေက တပ်မတော်ကို စော်ကား နေကြပြီ။ ဒါတွေကို မြင်နေရတာ ရင်နာတယ်။ ခံပြင်းတယ်။ ကျွန်မ အဖေ တပ်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ အခု ခြေတစ်ဘက် မရှိတော့ဘူး။ ကျွန်မတို့ အားလုံးကို ပညာကောင်းကောင်းသင်ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ တစ်မိသားစုလုံး ဂုဏ်ယူတယ်။ အခုအချိန်မှာ တပ်ကို မကောင်းပြောနေတာတွေ မြင်ရတော့ စိတ်ပျက်တယ်။ ကိုယ်အာဏာရဖို့အတွက် စစ်တပ်ကို ဖြိုခွဲတယ်။ လူထုက မုန်းတီးလာအောင် လုပ်နေတယ် လို့ပဲ မြင်တယ်။ အန္တရာယ်များတယ်။ ရွံဖို့လည်း ကောင်းတယ်။ ဒီလိုပွဲမျိုးက မကြာမကြာ လုပ်ဖို့ကောင်းတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် တက်မှာပါ” ဟု ဒေါ်မြမြ၀င်းက ပြောဆိုသည်။
“ဒီပွဲက လူမသိ သူမသိ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ အညတရ စစ်သည်သူရဲကောင်းတွေကို ဂုဏ်ပြု အလေးပြုတဲ့ ပွဲပါပဲ။ ဒီပွဲမှာ တပ်မတော်ကို ချစ်မြတ်နိုးသူ ဘယ်သူမဆို ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရည်ရွယ်ချက်က ရှင်းရှင်းလေးပါ။ တိုင်းပြည်အတွက် ခေတ်အဆက်ဆက် အသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့ တပ်မတော်သားတွေ ဒီနေ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်ကြီးထဲမှာ သိက္ခာကျနေရတယ်။ ကျန်ရှိနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့မှာ တာဝန် ရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ စွန့်လွှတ်မှု၊ သူတို့ရဲ့ ရဲရင့်မှု၊ သူတို့ရဲ့ ပေးဆပ်မှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ အလေးအမြတ် ပြုရမယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ကောင်းရာမွန်ရာ ဘုံဘ၀ တွေက ရင်နာနေကြမှာကို ကျွန်တော်တို့ မလိုလားဘူး။ တပ်မတော်တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အသက်ပေးပြီး ရေးထိုးခဲ့တဲ့ သူတို့အားလုံးဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သူရဲကောင်းတွေပဲ။ သူတို့ ဂုဏ်ကို ကျွန်တော်တို့ ချီးကျူးရမယ်။ သူတို့ရဲ့ ရဲရင့်မှုကို ကျွန်တော်တို့ မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ သူတို့ရဲ့ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ကို ကျွန်တော်တို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားရမယ်။ အနိမ့်ဆုံး သူတို့ကို ဂုဏ်ပြုပွဲတစ်ရပ် လုပ်ရမယ်။ ဒီလို စဉ်းစားပြီး ကျွန်တော်တို့ လုပ်နေတာပါ။ အခုဆိုရင် ကြည့် နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေက စစ်တပ်ကို လက်ညိုး ငေါက်ငေါက်ထိုး၊ သူပုန်တွေ ဓါးပြတွေကို အမွှမ်းတင် လုပ်နေကြတာ ရင်နာစရာ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် စစ်တပ်က အရာရှိဟောင်းတွေ။ ဒီကနေ့ စစ်တပ်ကို ပြန်ပြီး မကောင်းပြောနေကြပြီ။ နိုင်ငံရေးရူး၊ အာဏာရူးတွေ ကိယ့်ကို ပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ကို ပြန်ပြီး စော်ကားနေကြပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲကို စီစဉ်ရတာပါ။ စစ်တပ်ဆိုတာ စည်းကမ်းတကျ အဖွဲ့အစည်းပါ။ ဒီပွဲမှာလည်း စည်းကမ်းရှိရှိ ကျွန်တော်တို့ လုပ်သွားမှာပါ။ ခေတ်အဆက်ဆက် လူမသိသူမသိ ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပေးနိုင်သလောက် အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ ဘယ်သူမဆို ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်” ဟု ဂါရ၀ပြုပွဲ အခမ်းအနား စီစဉ်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီတွင် ရွှေတိဂုံစေတီမြောက်ဘက်မုခ်ရှိ သူရဲကောင်းစစ်သည်ဗိမာန်တွင် ခေတ်အဆက်ဆက် ကျဆုံးခဲ့ရသော သူရဲကောင်း စစ်သည်အားလုံးကို ရည်စူး၍ ဂါရ၀ပြုပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ရာ အငြိမ်းစားစစ်မှုထမ်းဟောင်းများ၊ ယင်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ အများအပြား တက်ရောက်ကြမည် ဖြစ်သည်။
တပ်မတော်အား သံယောဇဉ်ရှိသူ မည်သူမဆို ပူးပေါင်းပါဝင်နိုငကြောင်းလည်း ဖိတ်ခေါ်ထားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
၀မ်ပေါင် နိုင်ငံတော် (သို့မဟုတ်) စာမတတ် ပေမတတ် တစ်ယောက် ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်
18:00 သောက်တစ်လွဲ လုပ်ရပ်များ No comments
ဒီနေ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲ့ငြိမ်းချမ်း ရေး လမ်းကြောင်း ကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် အဓိ က ပြဿနာ က KIA ဆိုတာ တွေ့ရ လိမ့် မယ်။ လက်ရှိ အခြေ အနေ မှာ KIA ရဲ့ လုပ်ရပ် တွေ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကျုပ် အနေ နဲ့ စိတ်ပျက် သလို ရှက်လဲ ရှက်တယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်သူ လဲ ဆိုတာ ကတော့ ကျွန်တော့် မိသားစု ၀င်တွေ ရဲ့ အသက် တွေ အတွက် မပြော တော့ ဘူး။ ကိုယ့် ဂုဏ်ကို ဖော် မသူတော် လို့ပဲ ပြောချင် ပြောကြ ပါစေ။ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ၀န်ခံ ရလျှင် ကျွန်တော်ဟာ စစ် အစိုးရ ကို ၁၂ နှစ် တိတိ တော်လှန် ခဲ့တဲ့ လူ တစ်ယောက် ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီ တော်လှန် ရေး အောင်မြင် ပါ့ မလား လို့ မေးလာ တိုင်း ကျွန်တော် ဘာ ပြန်ဖြေ ရမှန်း မသိ ခဲ့ဘူး။ မင်း ဘယ်သူ့ အတွက် တော်လှန် နေ လဲ လို့ မေးတိုင်း ကျွန်တော့် မှာ အဖြေ ဆိုတာ ရေရေ ရာရာ မရှိ ခဲ့ ဘူး။ အခု ကျွန်တော် တော်လှန်ရေး မလုပ် တော့ဘူး။ စစ် နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဘယ် အရာ ဟာ ကောင်း သလဲ ဆိုတာ သိ ခဲ့တဲ့ အတွက် ကျွန်တော့် ဘ၀ မှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင် ကို လျှောက်လှမ်း နေပြီ။
ကျွန်တော် ဟာ ဘယ် ပါတီ ဘယ် အဖွဲ့အစည်း မည်သူ မည်ဝါ ရဲ့ ပေးစာ ကမ်းစာ နဲ့ မှ ဒီစာ ကို ရေးသားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း ဦးစွာ ပြော လို ပါတယ်။ ဒီစာ ကို တိုင်းပြည် မျက်နှာ တစ်ခု တည်း အတွက် KIA ဘာလဲ၊ ဘာတွေ လုပ်နေလဲ က စပြီး တပ်ဖွဲ့ တွင်း က အတွင်း သတင်း အားလုံး ထုတ်ဖော် ရေးသား ဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ နောက် တစ်ခု အနေနဲ့ ကတော့ ယနေ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ အစည်း တွေ နဲ့ မီဒီယာ တွေ ဟာ စစ်တပ် ကို သင်းကွပ် ချင်တာ တစ်ခု နဲ့ KIA အကြောင်း နကန်း တစ်လုံး မှ မသိ ဘဲ အရူး ဘုံမြှောက် ပေး နေ တာ ကြောင့် KIA ဘာကောင် မှန်း သိအောင် ရေး ရတာ ဖြစ် ပါတယ်။
ပထမ ဦးစွာ ပြောချင် တာ ကတော့ KIA ဆိုတာ ဘယ် ကချင် ကို မှ ကိုယ်စား မပြုဘူး ကွ လို့ အော်ပြော လိုက်ချင် တာ ပါပဲ။ နောက် တစ်ခု ကတော့ KIA ပါးစပ် က တစ်ဖွဖွ ပြော နေတဲ့ ၀မ်ပေါင် နိုင်ငံတော် ဆိုတာ ဘယ် ကချင် လူမျိုး ရဲ့ ဆန္ဒ မှ မဟုတ် ဘူး။ နောက် ထပ် ရှိပါ သေး တယ် ခင်ဗျား တို့ အားလုံး မျှော်လင့် နေတဲ့ ဖက်ဒရယ် တပ်မတော်၊ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဆိုတာ KIA ရဲ့ စိတ် ထဲမှာ လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိ ပါဘူး လို့ ပဲ ပြောချင် ပါတယ်။ ဒါတွေ ဟာ အစိုးရ ကို ထိပ်တိုက် လုပ်ချင် လို့ ဇာတ်ကွက် ဖန်တီး ထားသော၊ မဖြစ် နိုင်မှန်း သိတဲ့ အတွက် တောင်းဆို နေသော လုပ်ကွက် တစ်ခု သာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါ ဆိုရင် KIA လိုချင် နေတာ ဘာလဲ၊ KIA ဖြစ်ချင် နေတာ ဘာလဲ ဒါတွေ အားလုံး ဟာ ဘယ်သူ့ အကြံ တွေ လဲလို့ မေး လာရင်တော့ တစ်ခါ တည်း ပြော လိုက် ပါမယ်။ KIA ၏ ရည်ရွယ် ချက် သည် မည်သည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု လည်း မဟုတ်၊ မည်သည့် ဖက်ဒရယ် တပ်မတော် မှ လည်း မဟုတ် ပါ။ သူတို့ လိုချင်တာ တစ်ခု တည်း ရှိပါ တယ်။ ကချင် ပြည်နယ် ကြီး တစ်ခု လုံး ကို သူတို့ လက်ထဲ လွှဲပေး ပြီး ၀မ်ပေါင် နိုင်ငံ တော်ကြီး တည်ထောင် လိုတဲ့ တစ်ခု တည်းသော ဆန္ဒ သာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါတွေ အားလုံး ဟာလည်း မည်သည့် ကချင် လူမျိုး များ ၏ ဆန္ဒ မှ မဟုတ် ဘဲ အင်ဘန်လ ဆို သည့် အာဏာရှင် အရူး တစ်ယောက် ထဲ ရဲ့ အကြံ အစည် မူဝါဒ များသာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အင်ဘန်လ ဆိုတာ လက်ရှိ KIO ရဲ့ ဒု ဥက္ကဌ ပါ။ ဒါဆို အင်ဘန်လ က ကြိုးကိုင် နေတယ် ပြောပြီး ဘာ လို့ ဥက္ကဌ မလုပ် သလဲ လို့ မေးလာ နိုင်စရာ ရှိ ပါတယ်။ ဘာလို့ မလုပ် သလဲ ဆိုရင်တော့ အင်ဘန်လ မှာ လူရှေ့ လုံးဝ ထွက်ပြ လို့ မရတဲ့ အားနည်း ချက် တစ်ခု ရှိနေ လို့ ပါပဲ ။ အဲဒါ ဟာ ဘာလဲ ဆိုရင် အင်ဘန်လ ဟာ စာ တစ်လုံး မှ မတတ် တဲ့ လူ တစ်ယောက် ဖြစ်နေ တာ ပါ ပဲ။ အင်ဘန်လ အနေ နဲ့ စာ တစ်လုံး မှ မတတ် တဲ့ အတွက် နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာ မှာ လူလုံး ထွက်ပြ လို့ မရ နိုင် ပါဘူး။ နောက် တစ်ချက် ကတော့ နိုင်ငံ ရေး စာ မျက်နှာ ပေါ် မှာ သူ ချုပ်ကိုင် ထားတဲ့ လူတွေ ကို ထိုးကျွေး ထားခြင်း ပါဘဲ။ လက်ရှိ အခြေ အနေ မှာ အစိုးရ နဲ့ အဓိက ဆွေးနွေး နေသူ ကတော့ ဂွမ်မော် ပါ။ KIA ကို ကွပ်ကဲ နေတာ ကတော့ ဂမ်ရှောင် ပါ။ ဇောင်းဟရား ဆိုတာ ကတော့ အင်မတန် မှ သနား စရာ ကောင်းသော အမည်ခံ ဥက္ကဌ ကြီး ပါပဲ။
ဒီတော့ KIO / KIA နဲ့ ပက်သက် လာရင် ပြဿနာ တစ်ခုခု ဖြစ်တိုင်း ထို သုံးယောက် က ဒိုင်ခံ ဖြေရှင်း ရသလို ဒုက္ခ ပေါင်းစုံ လဲ ခါးစည်း ခံနေရ တဲ့ လူတွေ ပါပဲ။ ဗမာ နဲ့ ပြဿနာ တက်ရင် ဗမာ က ဂွမ်မော် ကို မုန်းမယ်၊ စစ် ဖြစ်ရင် ဂမ်ရှောင် ကို လက်ညှိုး ထိုး ကြမယ်၊ ဇောင်းဟရား ကတော့ ဥက္ကဌ ဆိုတော့ ပြဿနာ အားလုံး သူ့ ခေါင်း ပေါ် ပေါ့။ အင်ဘန်လ ကတော့ ဒု ဥက္ကဌ ဆိုတော့ အေးရာ အေးကြောင်း နေ တယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံး ဟာ သူ့ အကြံ တွေ ချည်း ဆိုတာ ဘယ်သူ မှ မသိ ကြဘူး။ ဒါ ဆိုရင် ထို သုံးယောက် က ဒီတိုင်း ငြိမ်ခံ နေသလား လို့ ပြန်မေး လာကြ မယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ငြိမ်မခံ လို့ မရ ပါဘူး။ အဲဒီ သုံး ယောက် စလုံး ရဲ့ အနီးကပ် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ အားလုံး ဟာ အင်ဘန်လ ရဲ့လူယုံ တွေ ချည်း ပါပဲ။ တစ်ခုခု လုပ်မယ် ကြံတာ နဲ့ ဂွမ်မော် တို့ အသက် ပျောက်သွား ဘို့ပဲ ရှိပါ လိမ့်မယ်။ ဒါဟာ အင်ဘန်လ ရဲ့ အင်မတန် ပိရိ တဲ့ အကြံ ဉာဏ် ပါ။
ကချင် မှာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တွေ တွေ့ဆုံ တုန်း က အင်ဘန်လ ပြောခဲ့တဲ့ စကား ဟာ ဂွမ်မော် တို့ ဂမ်ရှောင် တို့ ရင်ထဲ ခု ထိ ခံစား နေရ ဆဲ ပါဘဲ။ အင်ဘန်လ ဘာပြော ခဲ့သလဲ ဆိုတော့ "ကျုပ်ဟာ အာဏာရှင် ခေါင်းဆောင် ပဲ၊ ဂွမ်မော် တို့၊ ဂမ်ရှောင် တို့၊ ဇောင်းဟရား တို့ ဆိုတာ ကျုပ် လူတွေ၊ ကျုပ် ခိုင်းတာ သူတို့ လုပ်ယုံ ပဲ၊ ကျုပ်က KIO ရဲ့ ဥက္ကဌ နေရာ ကို အချိန် မရွေး ယူလို့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ် မ ယူဘူး၊ ကျုပ် တပည့် တွေကို ပဲ ခိုင်းမယ်" တဲ့။ အင်ဘန်လ ဟာ KIO ဥက္ကဌ မလုပ် ပေမယ့် UNFC မှာ တော့ ဥက္ကဌ လုပ် ပါတယ်။ ဒါ ကလဲ UNFC မှာ ပါလာ မယ့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် တွေ ဟာ သူ ခိုင်းတာ လုပ်မယ့် ဂွမ်မော် တို့လို သူ့ တပည့် တွေ မဟုတ် လို့ ပါပဲ။
ဒါကြောင့် KIO အနေ နဲ့ UNFC ကို ချုပ်ကိုင် ချင်တာ ရော သူ့ ရဲ့အာဏာ စက် ကို ပြချင်တာ အတွက် ရော အင်ဘန်လ ဟာ ဥက္ကဌ လုပ်နေ တာပဲ။ အင်ဘန်လ ဟာ အာဏာ ရရင် ပြီးရော ဘာမဆို လုပ်မယ့် လူစား ပါ။ ၀မ်ပေါင် နိုင်ငံတော် အတွက် အင်အား ကြီးမား စေဘို့ ကုလား တွေ ကို တိုင်းရင်းသား ဆိုပြီး ကချင် ပြည်ထဲ ဆွဲထည့် တာ အင်ဘန်လ အကြံ ပဲ။ ဒီ ကိစ္စ နဲ့ ပက်သက် ပြီး ဂွမ်မော် နဲ့ အင်ဘန်လ အကြီး အကျယ် ပြဿနာ ဖြစ် ဘူးတယ်။ ဂွမ်မော် က ကုလား တွေ လာတာ ကို မကြိုက် ဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး တော့လဲ အင်ဘန်လ ကို မကျော် နိုင်တဲ့ ဂွမ်မော် အရှုံးပေး လိုက် ရတယ်။ ဒီလို နဲ့ RSO တွေ ကချင် ထဲမှာ စစ်ရေး လေ့ကျင့် နေတော့ တာပဲ။
တိုင်းရင်းသား တွေ့ဆုံ ပွဲမှာ အင်ဘန်လ က ပြောတယ်။ "ခင်ဗျား တို့ အစိုးရ ကို ပြန်ချ ပါ။ ကုန်ကျ သလောက် ကျွန်တော် ခံမယ်" တဲ့။ သူက ဘယ်က ရတဲ့ ငွေ နဲ့ ထောက်ပံ့ မှာ လဲ။ ကျောက်စိမ်း က လား။ ဘိန်း က လား။ မဟုတ် ဘူး။ ခင်ဗျား တို့ မသိတာ တစ်ခု ရှိ သေးတယ်။ ကျွန်တော် ဆက်ပြော ပါမယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ KIO နဲ့ ဒီ တစ်သက် ငြိမ်းချမ်းရေး ယူဘို့ ဘယ် သကောင့် သား မှ မစဉ်းစား ပါနဲ့ လို့ ကျွန်တော် က ထပ်ဆောင်း အကြံပေး လိုက် ပါမယ်။ အင်ဘန်လ ဟာ အာဏာရှင် လို့ သူ့ကို သူ သတ်မှတ် နေပြီ။ တရုတ် က လက်မခံ တော့ မှာ ကို ကြို သိတဲ့ အင်ဘန်လ ဟာ ခု ဆိုရင် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံး ခံစစ် စခန်း ကို အိန္ဒိယ နယ်စပ် မှာ ဆောက် နေပြီ။ ကျွန်တော် သိ သလောက် ဆိုရင် ပန်ဆောင် တောင်ကြော မှာ ရှိတယ်။ အဲဒီ နေရာ ဟာ ရွှေတွေ ဖောခြင်း သောခြင်း ထွက် တဲ့ ရွှေ ကြောကြီး တစ်ခု ရဲ့ ထိပ် တည့်တည့် မှာ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ နေရာ ကို လေယာဉ် ပစ် တွေ ပါ ဆင်ထား တယ်။ စခန်း အခိုင် အမာ ဆောက် နေတယ်။ အင်ဘန်လ ဟာ တိုင်းရင်းသား ခေါင်း ဆောင် တွေ လာတုန်း က သူ ကိုယ်တိုင် ကြွားခဲ့တာ အသံ ဖိုင်ပါ သက်သေ ရှိတယ်။ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်း ရေး အလျှင် အမြန် ရချင် တယ် ဆိုရင် တော့ အဲ့ဒီ နေရာ ကို အစိုး ရ တပ်တွေ အနေ နဲ့ ဘယ်သူ့ မျက်နှာ မှ မထောက် ပဲ အခု အချိန် ကတည်း က အမြန် ဆုံး ထိမ်းချုပ် ထား နိုင်ဖို့ လိုမယ် ဆိုတာ ကို ကျွန်တော် ပြောထား ချင်တယ်။
နောက်ပိုင်း မှာ ငြိမ်းချမ်း ရေး လိုချင် နေတဲ့ KNU ဟာ အင်ဘန်လ အကြံတွေ သိလာ တဲ့ အတွက် UNFC ကနေ လုံးဝ ထွက်သွား တဲ့ အထိ ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ဖြစ်ခဲ့ ရ တယ်။ ကရင် မပါ ရင် UNFC ဟာ သုံးစား မရတော့ မှန်း သိတဲ့ အင်ဘန်လ ဟာ KNU ကိုပါ နှစ်ခြမ်း ခွဲ ဘို့ ကြံစည် ခဲ့တယ်။ သဘော ထား တင်းမာ တဲ့ KNU တပ်မဟာ ကို သွေးခွဲ လှုံ့ ဆော် တယ်။ အဲဒီ ကနေ ခွဲထွက် လာမယ့် အဖွဲ့ ကို UNFC ထဲ ကောက်ထည့် ဘို့ အထိ ကြံ ခဲ့တယ်။ နောက် တစ်ခု ပြော သေးတယ်။ " အစိုးရ ကို တော်လှန်မယ့် သူ မှန်သမျှ KIA က ထောက်ပံ့ မယ် " တဲ့။ အဲဒီ စကား ဟာ အပြင် လူတွေ မသိသေး တဲ့ အင်ဘန်လ ပါးစပ် က ထွက်ခဲ့တဲ့ စကား အတိ အကျ ပဲ။
တစ် လောက ပါကြီး ကိစ္စ နဲ့ မြ၀တီ ကို ရောက်လာ တဲ့ ဗိုလ်ပြုတ် နေမျိုးဇင် ကို မဲဆောက် က နယ်လှည့် ကျောပိုး အိတ် စခန်း မှာ KNU က ဖဒို မန်းမန်း က ဘတ် ၄ သိန်း ထုတ်ပေး တယ်။ " ငါတို့ အတွင်း အပြင် ညှပ် တိုက်ရင် ဒီ အစိုးရ ၅ နှစ် မခံဘူး " လို့ ဖဒို မန်းမန်း ပါးစပ် က နေမျိုးဇင် ကို ပြော ခဲ့တာ ကျွန်တော့် နားနဲ့ ဆက်ဆက် ကြား ခဲ့ ရတယ်။ အဲဒီဘတ် ၄သိန်းက KIA ပိုက်ဆံပဲ။ ဖဒို မန်းမန်း ဆိုတဲ့ ကရင် လူလည် က ပိုက်ဆံ ရရင် ဘာမဆို လုပ်တဲ့ ကောင်။ KNU ကို ခွဲဘို့ အင်ဘန်လ ပိုက်ဆံ နဲ့ မွေး လိုက် တဲ့ ငတိ ပဲ။ နေမျိုးဇင် လို ကောင်မျိုး အတွက် အင်ဘန်လ က ဘတ် ၄ သိန်း ဖဒို မန်းမန်း ကို ထုတ်ပေး တာ သိပ် မဆန်း လှ ပါဘူး။ တစ်ခါ ထဲ ပြော လိုက်ချင် တာ က ဗိုလ်ပြုတ် နေမျိုးဇင်။ မင်း ကို ငါတို့ ငြိမ်းချမ်း ရေး လိုလား တဲ့ သူတွေ က မလိုလား ဘူး ဆိုတာ ပါပဲ။ ငါတို့ က သစ္စာ ဖောက် တွေ ဆိုရင် ဘယ်အဖွဲ့ အစည်း က ဖြစ်နေ ဖြစ်နေ မယုံ ဘူး။ ဒါက ထားပါ။
ဒီလောက် ဆိုရင် KIO / KIA ရဲ့ အတွင်း အပြင် လေး နဲနဲ စုံလောက် ပြီ ထင် တယ်။ KIA ထဲက သနား စရာ ဂွမ်မော်၊ ဂမ်ရှောင်၊ ဇောင်း ဟရား ဆိုတဲ့ လူကြီး သုံးယောက် ရဲ့ ဘ၀ ကိုလဲ နားလည် လောက် ရောပေါ့။ အဲတော့ ထပ် ပြောချင် တာက KIA ဟာ လုံးဝ ငြိမ်းချမ်း ရေး ယူလိမ့် မည် မဟုတ် ဘူး။ ၀မ်ပေါင် နိုင်ငံ ထူထောင် ဘို့သာ သူ တို့ ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ် ချက်။ ဖက်ဒရယ် ဘာညာ ဆိုတာ နား ထောင် ကောင်းအောင် လျှောက် ပြောတာ။ မဖြစ် နိုင်မှန်း သိတယ်။ ဒါကြောင့် မဖြစ် နိုင်တာ ကို ပြောပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်အောင် လုပ်နေ တာပဲ ဖြစ်တယ်။
သူတို့ မှာ ကျောက်စိမ်း မှောင်ခို အရောင်း အ၀ယ် တွေ ရှိနေတယ်။ ဘိန်းချက် လုပ်ငန်း တွေ နဲ့ မူးယစ် ဆေးဝါး လုပ်ငန်း တွေ ရှိနေ တယ်။ အခု နောက်ဆုံး အန္ဒိယ နယ်စပ် က ရွှေ အကြီး အကျယ် ထွက် တဲ့ နေရာ တစ်ခု ကို အယ်ဘန်လ အနေ နဲ့ ချုပ်ကိုင် ဖို့ ကြံစည် အားထုတ် နေပြီ။ သူ့ ရဲ့ အစီ အစဉ် တွေ ကို တပ်မတော် အနေနဲ့ အခု ကတည်း က မထိမ်းချုပ် ထား နိုင်ဘူး ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံ ရဲ့ တနိုင်ငံ လုံး အပစ် အခတ် ရပ်ဆဲ ရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေး ဆိုတာ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း ဝေး ဆိုသလို ဖြစ်နေဦး မှာ ပါပဲ။ ဒါ တွေ အားလုံး ကို မှ မထိမ်းချုပ် နိုင် ရင်တော့ ဒီ ကိစ္စ တွေ ရဲ့ အဓိက လက်သည် ဖြစ်တဲ့ စာမတတ် ပေမတတ် ကောင် အင်ဘန်လ ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ကမ္ဘာ ထဲက ၀မ်ပေါင် နိုင်ငံတော် ထဲမှာ တော့ ကချင် တစ်မျိုး သား လုံး နင်းပြား ဖြစ် ပြီး ဆင်းရဲ တွင်း နက်နေ ကြ ရ ဦးမယ် ဆိုတာ ကို သိစေ ချင်တာ ပါပဲ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူး တင် ပါတယ်။
ကျွန်တော် အားလီ ပါ။
From:__ Golden Land Myanmar
နင်အပျိုစစ်ရဲ့လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေဆိုဖို့ မ၀ံ့မရဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ အတော်များများ ဖြစ်လာနေပါပြီ…
15:00 မြင်သမျှ ပြောမည် No comments
ယခုခေတ်ကြီးတွင် ယခင်ကဲ့သို့ အတွဲ(သမီးရည်းစား)များ ချိန်းတွေ့ရာနေရာမှာပန်းခြံများမဟုတ်တော့Mini Cinema ၊ တည်းခိုခန်း၊ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်စသည့်ြ ဖင့်ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်တည်းတံခါးပိတ် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သောနေရာများမှာ တစ်စ တစ်စတိုးမြင့်ဖွင့်လှစ်လာခြင်းကြောင့်သမီးပျိုများ အတွက် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမပြုလုပ်ရသေးဘဲ အပျိုဘ၀စွန့်လွှတ်ရာနေရာ၊ ဘ၀ပျက်ရာ နေရာတစ်ခု ကဲ့သို့ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု သမီး ရှိမိဘများက တွေး ပူနေကြပြီ၊ တာဝန်ရှိသူတွေကရော ဒီအတိုင်း ကြည့်နေကြတော့မှာလား။
တွေးပူတာနဲ့တင်မပြီးသေးပါဘူး၊ ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်၊ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့က မန္တလေးမြို့ပေါ်ကိုရောက် အလုပ်တစ်ခုမလုပ်မီမှာ ရည်းစားထား၊ အဆိုပါ နေရာတွေကို သွားရတာ လွယ်ကူ တဲ့အတွက် သွား၊ ကိုယ်ဝန်ရ၊ ရတဲ့ကိုယ်ဝန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ အနေအထားမရှိတဲ့ သူနဲ့ တွေ့ပြီး တဲ့နောက် ကိုယ်ဝန်ကိုလက်သိပ်ထိုးဖျက်ချ၊ ဆရာဝန်မဟုတ်တဲ့သူက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချပေးတော့ ကျေးရွာတစ်ခုက ကွမ်းတော်ကိုင်ပန်းတော်ကိုင်အသက်၂၁နှစ် အရွယ် မိန်းက လေးတစ်ဦးမှာ အသက်မသေဆုံးသင့်ဘဲ သေဆုံးခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ဆေးရုံပြဖို့လုပ်တယ်၊ အမျိုးသမီးဆေးရုံကြီးကိုသွားမပြဘူးလို့ အတင်းငြင်းတဲ့အတွက် မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကိုပြတယ်၊ ဟိုစစ်ဒီစစ်ဆေးနေပြီး ဘာရောဂါ မှ မတွေ့ရှိပါဘူး၊ ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ထင်တဲ့အတွက် ရွာပြန်လာတယ်၊ ရွာရောက်တော့ အသားအရေမည်းခြောက်နေပြီးဆရာဝန်နဲ့ကုမရလို့ သားဖွားဆရာဝန်မ တစ်ဦးကိုပြကြည့်ရာမှ သားအိမ်ထဲမှ ကျန်တဲ့ အသားက ပုတ်နေပြီ အမြန်ဆေးရုံပို့လို့ပြောပေမယ့် ပို့တဲ့လမ်းမှာတင်အသက်သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်”မျက်ရည်မ ဆည်နိုင်အောင်ငိုကြွေးထားသော မိခင်က သမီးဖြစ်စဉ်အား ရှင်းပြခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်အနီးဝန်းကျင်မှာအတွဲတွေအတွက်လေအေးစက်ပါတဲ့အခန်းတွေကို တစန်ာရီကျပ်နှစ်ထောင်ဝန်းကျင်နဲ့အတားအဆီးမရှိဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားတာ။
ထို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရခြင်း အစပထမမှာအရှက်ကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ နောက်ပိုင်း ပြဿနာဖြစ်ပွားကာမှ အရှက်တရား ကို ရှေ့တန်းတင် ဆေး ကုသမှုမပြုခဲ့ တာကြောင့် အခုလိုအဖြစ်မျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် မိဘတွေထိန်းသိမ်းဖို့၊ ကာယကံရှင် မိန်းမပျိုတွေအနေနဲ့လည်း ထိန်းသိမ်းဖို့လိုလာနေပြီဆိုတာကို သိသာထင်ရှားစွာ မီးမောင်းထိုးပြလိုက်တာပါပဲ။သိသာထင်ရှားစွာပေါ်လွင်လာတာနဲ့အတူ လက်ရှိအနေအထားအရ အထက်ပါဖြစ်စဉ်လိုမျိုး ဘယ်နှဦးလောက်ြ ဖစ်နေပြီလဲဆိုတာကတော့ အတိအကျမသိရပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အရေအတွက်အရတော့မနည်းတော့ဘူးဆိုတာကတော့ တွေးကြည့်ရုံနဲ့သိသာပါတယ်။
အဲဒါတွေဖြစ်ပွားလာရတဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်၊ တက္ကသိုလ်နားဝန်ကျင်မှာလည်းဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ Mini Cinema တွေကိုမှိုလိုပေါက်အောင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားတာတွေကြောင့် အချိန် ပိုင်းအနားယူသွားအိပ်၊ဘ၀ပျက်ကြရတာတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ၊ စာပေပိုင်းဆိုင်ရာကို လေ့လာမှုကတော့ မသိဘူး၊ နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ လိုက် နာနေကြတာကတော့ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဘဲ တွေ့မြင်နေရတာပါပဲ။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသက် ၂၄ နှစ် အရွယ်မခင်ခင်က(အမည်လွှဲ) “နယ်မြို့ကလာတဲ့မိန်းကလေးတွေ အများဆုးံ ၀န်ထမ်းအလုပ်လုပ်ပြီး မြို့မှာနေထိုင် ကြ တာများတယ်၊သူတို့က ငွေကို အဓိကထားတယ်၊ ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ အမြင်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်၊ အဆောင်တစ်ခုမှာ မိန်းကလေး၃၀ဦး လောက် ရှိမယ်ဆိုရင် ငါးဦးနဲ့ ရှစ်ဦးကြားမှာဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မနေခဲ့တဲ့ အဆောင်က အနေအထားကို ပြောတာပါ၊အဲဒီထဲမှာ တချို့ဗိုက်ပေါ်လို့ပြန်သွားတာ၊လက်သိပ် ထိုးဖျက်ချတာ မျိုးစုံရှိပါတယ်၊အဓိကတော့အလေးမထားတာနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေပေါလာတာကြောင့်လို့
ထင်တယ်၊ဒါတင်မကတစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်ဟိုတယ်၊ ဘယ်နေရာက သန့်တယ်ဆိုတာမျိုးအထိ လမ်းညွှန်လုပ်ဆောင်လာကြတာမျိုး ဖြစ်လာနေပြီ” ဟု ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုအပြင်မန္တလေးမြို့မှာ အခါကြီးရက်ကြီး အလည်ထွက်၊ ဘုရားဖူးသွားတဲ့ ခေတ်မ ဟုတ်တော့ဘဲ ဟိုတယ်လူပြည့်တဲ့အထိစည် ကား တဲ့မြို့၊မာဆတ်တွေ တောင်ပုံရာပုံဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးအဲဒီမှာ ရရှိတဲ့ ငွေကြေးအနည်း ငယ်ကြောင့်ဘ၀ပျက်သွားရတဲ့ သမီးပျိုတွေနေထိုင်တဲ့မြို့၊ အရက်သေ စာေ သာက်စားဖို့အတွက်လည်း အသက်၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီလားဆိုတာမကြည့်၊ ရောင်းချဖို့ရဖို့အတွက် အဓိကဦးစားပေးနေတဲ့မြို့ စသည့်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုမ ရှိတော့တဲ့ မြို့အဖြစ် တဖြည်းဖြည်းပုံပြောင်းလို့လာနေပါပြီ။
ထဘီခြေဖနောက်ဖုံးဝတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော် မန္တလေးက မန္တလာသူကနေ ဒူးအောက်မဆင်းအ၀တ်အစားတွေဝတ်လာပြီး ယဉ်ကျေးမှုပြယုဂ် နွမ်းပါးလာတဲ့ မြို့အဖြစ် တဖြည်းဖြည်း ပုံပြောင်းစပြုလာနေပြီလို့ ထင်တယ်။ ဒါတွေသာမက အမျိုးသမီး များအနေဖြင့် ယခင်ကလိုမျိုး မိမိတစ်သက် တာပေါင်း သင်းနေထိုင် မည့်သူနှင့် နေထိုင်ခြင်း ကိုအချို့သောသူများက လုပ်ဆောင် ကြသော်လည်း ယခုခေတ်တွင် ယင်းကဲ့သို့ ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲ မည့်သည့်အကြောင်း အရင်းမျှ မသိ ရသေးသောသူများနှင့် သမီးရည်းစားဖြစ်ကာ အလေးမထားဘဲ အတူတကွနေထိုင်ခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားမှုများရှိလာခြင်းဖြစ်ကာ အထက်ပါ ဖြစ်စဉ် များကဲ့သို့ အသက်သေဆုံးသည့်အထိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု အသက် ၄၅နှစ်ရှိဒေါ်အေးက သုံးသပ်ပြောဆိုခဲ့သည်။
သုံးသပ်ချက်များအပြင် လက်ရှိအချိန်ကာလအား ဒီမိုကရေစီခေတ်ဟုဆိုကာဖော်ချွတ်မော်ဒယ်များ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအရက်သေ စာသောက်စားမှုများကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြုလုပ်လာကြခြင်း၊ သမီးရည်း စားနေထိုင်မှုပုံစံ ပွင့်လင်းသထက် ပွင့်လင်းလာခြင်းတို့ကြောင့် အတုမြင် အတတ်သင် လာနိုင်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှ အပြာရောင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များအား အလွယ်တကူကြည့်ရှုလာကာမလိုလားအပ်သော အတုယူမှားများကိုလူငယ်၊ လူရွယ်များမှ ရယူ လာခြင်းကြောင့်လည်း တဖြည်းဖြည်း ယခုကဲ့သို့အသွင်ပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်သည်။
“မူးယစ်ဆေးဝါးလက်တစ်ကမ်းမှာဝယ်ယူနိုင်တဲ့အနေအထား၊ ဆယ်ကျော်သက်များ လိင်မှုဆိုင်ရာ စူးစမ်းမှုအနေထား၊၁၈+ကားများ ဆိုင်များအား အလွယ်တ ကူဝယ်ယူနိုင်သည့် အနေအထားများကြောင့်အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုဝင်ရောက်လာပြီး၊လက်မထပ်မီအတူနေထိုင်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်တာပါ၊ဒါ့အပြင်သူများနိုင် ငံတွေလိုကျန်းမာရေးအသိစိတ်ဓာတ်၊ ဆေးဝါးပိုင်းဆိုင်ရာအသိ စသည့်တို့ကို သိရှိနားလည်ခြင်းမရှိတာကြောင့် ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်တာ၊အဲလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင် အားလုံးကို သိရှိလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာမှာ တာဝန်ရှိတယ်” ဟု ဒေါ်အေးကပြောသည်။
ဖြေဆိုဖို့မ၀ံ့မရဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတော တော် များများဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း ၊အားလုံးခြုံငုံသုံးသပ်ပြောဆိုခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ လက်ရှိလူငယ်တွေကို အဓိကထားဆိုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသမီးတစ် ဦးကပြောခဲ့ပါတယ်။
ထို့ကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၀န်ထမ်းအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သည့်ကိုအေး(အမည်လွှဲ) အား ထင်မြင်ချက်မေးမြန်းရာ “ ကျွန်တော်တို့ ယောက်ျားေ လးတွေက ကိုယ်တစ်သက်တာ လက်တွဲရမယ့်သူဖြစ်မယ့်မိန်းမတွေမှာ ရှိသင့်တဲ့အပျိုဂုဏ် ဆိုတာမျိုးကို တန်ဖိုးထားနေကြဆဲပါ၊အဖော်အချွတ်တွေ ပေါ်လာလို့ လည်းယောက်ျားဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်တယ်၊အလေးထားမှုတော့မရှိပါဘူး”ဟု ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါမျိုးတွေမဖြစ်၊ သမီးပျိုတွေကို ဝေဖန်နေ တာမျိုးတွေရှိလာရတဲ့ အဓိက အချက်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာကနေ ထိန်းချုပ်မှုမပြုတာ၊ လူငယ်လူရွယ်တွေ နေထိုင် သွားလာမှုများတဲ့ ကျောင်း၊ တက္ကသိုလ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲလိုမျိုးဆိုင်တွေကို ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုတာ၊ ဟိုတယ်တွေမှာ ကျောင်းသား၊ လူငယ်တွေကို တည်းခိုခွင့်ကို ကြပ်မတ်လုပ်ဆောင်တာ၊ အရက်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်များကိုဖွင့်လှစ်ခွင့်ကန့်သတ်တာတို့လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လုပ်ဆောင်ခြင်းကတော့ အခုထိထင်ထင်ရှားရှားမရှိသေးပါဘူး။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင် တက္ကသိုလ်
အနီးဝန်းကျင်မှာအတွဲတွေအတွက် လေအေး စက်ပါတဲ့ အခန်းတွေကိုတစ်နာရီကျပ်နှစ်ထောင်ဝန်းကျင်နဲ့ အတားအဆီးမရှိ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားတာ၊ အဲဒီနေရာမှာ တစ်နေ့ကို အတွဲပေါင်းရာဂဏန်းဝန်းကျင် အထိနေ့စဉ် လာရောက်ကြတာ၊အဲဒီထဲမှာ ဘယ်လောက်များ သမီးပျိုလေးတွေရဲ့ ဘ၀ပျက်စီးသွားရပြီလဲဆိုတာကိုချင့်ချိန်တွေးတောကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အမြင် မတင့်တယ်သလို ဥပဒေအရလည်း ခွင့်ပြုမယ်လို့ မထင်ပါဘူး၊ ဒါတွေမဖြစ်အောင်သက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ လျစ်လျူရှုမနေပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အတွက်လေအေးစက်ပါတဲ့အခန်းတွေကို တစ်နာရီကျပ်နှစ်ထောင်ဝန်း ကျင်နဲ့အတား အဆီးမရှိဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုထားတာ ။
14:00 သမိုင်းအမှန်တရားများကို ဖွင့်ချခြင်း No comments
ထိုးစစ်စတင်ပြီး တတိယမြောက်နေ့တွင် အစွန်းရောက်သောင်းကျန်းသူများကို နယ်စပ်မျဉ်းပေါ်အထိ တိုက်ထုတ်ပြီးဖြစ်နေပြီ။ သေနတ်သံများကတော့ ကြိုကြား ကြိုကြား ကြားနေရဆဲ။ တခါတရံ လက်နက်ကြီးကျည်များကလည်း ကျရောက်ပေါက်ကွဲနေဆဲ။ သူတို့တပ်ရင်းက ရှေ့တိုးပြီး နယ်စပ်မျဉ်းနှင့် ကိုက် (၅၀၀)လောက် အကွာထိ နေရာယူ ရင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်သည်။
ဆေးမှူးလေး ဗိုလ်ရဲနောင်နဲ့ သူ့ဆေးတပ်စုလေး အဖို့တော့ ဒီနေ့ တော်တော် အလုပ်များနေသည်။ ရန်သူ့လက်နက်ကြီးကျည်ကျပြီး အစ (Splinters)မှန်သော စစ်သည်များ တဖွဲဖွဲ ဝင်ရောက်လာ သောကြောင့့်ဖြစ်သည်။ ရဲနောင်တို့ အနေဖြင့် လုပ်စရာရှိသည်များကို ခပ်သွက်သွက်လုပ်နေကြသည်။ အခုတော့ ကျောင်းဆင်းစ ဆရာဝန်ပေါက်စနှင့် မတူတော့။ အရာရာကို အတတ်နိုင်ဆုံး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နှင့် လုပ်ဆောင်တတ်နေပြီလေ။ တိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံက သူ့ကို တစ်သက်မမေ့နိုင်အောင် သင်ပေးလိုက်သည်ဘဲ။ သူ့ဆရာကြီး နန္ဒ (Nanda Htun Htet)နှင့် ဝါရင့် ဆေးရဲဘော်များ၏ အစွမ်းကိုလည်း ပစ်ပယ်ထား၍ မဖြစ်။
လူနာကလည်း (၂၀)ကျော်လောက်ဖြစ်လာသည်။ ဒီနေရာမှာ ကျောင်းတုန်းက သူတို့ သင်ယူခဲ့ရတဲ့ လူနာရွေးချယ် စစ်ထုတ်ခြင်း (Triage) ဘာသာရပ်က အသုံးဝင်သည်။ (Triage အကြောင်း နောက်မှ ဗဟုသုတအဖြစ် အသေးစိတ်ရေးပါမည်။) တပ်ရင်းဆေးတပ်စုဖြစ်၍ ဘာမှတော့ အများကြီး မလုပ်နိုင်။ ဒဏ်ရာများအား ရောဂါပိုးမဝင်စေရန် ဆေးကြောခြင်း၊ သွေးထွက်များသူများကို သွေးတိတ်စေရန် သွေးကြောရှာပြီးချည်ခြင်း၊ Drip line တင်ခြင်းနှင့် တပ်မဌာနချုပ်ရှိ စစ်မြေပြင်ဆေးရုံသို့လွှဲပြောင်း ပို့ဆောင်ခြင်းတို့ကိုသာလုပ်နိုင်သည်။ သွေးသွင်းရန်လိုသော လူနာများကို ပေးရန်သွေးမရှိ၊ Facilities လည်းမရှိ။
ဒီနေ့ ရာသီဥတုက ထုံးစံအတိုင်းမကောင်းပြန်။ မိုးတဖွဲဖွဲနှင့် မြင်ကွင်းကပိတ်နေ။ အဲဒီတော့ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် လူနာမကောက်နိုင်။ ရဟတ်ယာဉ်သံကြားနေရပြီမှ မဆင်းနိုင်သည့်အဖြစ်ကို နားလည်ခံစားနိုင်မည်ဟုထင်ပါသည်။ ကိုစကိုင်း (Sky Hunter)ကတော့ မရ ရအောင်ဆင်းလာမည်ဟု စက်ထဲမှ ပြောနေသည်။
တပ်ရင်းတွေက ရှေ့ကို အတော်ရောက်နေပြီး တပ်မဌာနချုပ်က နောက်တွင်ပင်ကျန်နေသောကြောင့် အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုလမ်းကြောင်းက ရှည်နေသည်။ သောင်းကျန်းသူတွေကလည်း ဆုတ်ခွာစဉ်က တံတားအားလုံးကို ချိုးသွားသည့်အတွက် ချောင်းမြောင်းပေါများသော ဒေသတွင် စစ်ဆင်နေရသော သူတို့အဘို့ ဒုက္ခရောက်ရသည်။ “တိုက်ပွဲ မစတင်မီပင် တပ်ထောက်များက တိုက်ပွဲ၏ အနိုင်အရှုံးကို ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်” ဟူသော ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းက ဂျာမန်တပ်မတော်မှ စစ်သူကြီး ရွမ်းမဲ (Field Marshal Erwin Rommel) ပြောခဲ့သည့် စကားက သူ့နားထဲ ကြားယောင်လာသည်။ ဟုတ်သည်။ စစ်ပွဲ တစ်ပွဲ အတွက် အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှု (Logistics)က အသက်တမျှ အရေးကြီးလှသည်။
ဒီနေရာမှာ သူ့ ဆေးတပ်စု သူနာတင် BTR အကြောင်းပြောဖို့ဖြစ်လာသည်။
တစ်စီးတည်းသော သူနာတင် BTR – 3U M3 ကြောင့် နည်းနည်းတော့ အဆင်ပြေနေသည်။ BTR က ရေပြင်ပေါ်ဖြတ်ပြီး မောင်းနိုင်သည်လေ။ ဒီချောင်းတွေလောက်ကတော့ အသာလေးဖြတ်နိုင်သည်။ ပြဿနာက BTR က လူနာလေးဦးသာ သယ်နိုင်သည်။ တပ်ရင်းမှ အခြား BTR များကိုလည်း ခေါ်သုံးဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်။ အဲဒီတော့ ဒီတစ်စီးတည်းနှင့် အသွား အပြန် (၄)နာရီလောက်ခရီးကို ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်သွားနေရသည်။ ဒါ့အပြင် ယာဉ်မောင်းက တိုက်စစ် ပထမနေ့ကတည်းက သူတို့ဆေးတပ်စုအနီးကို လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ပေါက်ကွဲသောကြောင့် ဒဏ်ရာရပြီး နောက်ကိုပို့လိုက်ရသည်။ ယာဉ်မောင်း မရှိသောကြောင့် သူတို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်ကြရသေးသည်။ ယာဉ်မောင်း အပိုလည်းမရှိ။
သို့သော် ကယ်တင်ရှင်က ပေါ်လာသည်။ သူတို့တပ်ရင်း၏ ပြင်ဆင်ရေးအလုပ်ရုံ တပ်ခွဲမှ အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိ ဗိုလ်ဖောကြီး (Faw Gyi)ဖြစ်သည်။ ရဲနောင်နဲ့က တစ်နယ်တည်းသား။ ညီအစ်ကိုလို ခင်သူဖြစ်သည်။ သူက စွယ်စုံရ။ လက်နက်လဲပြင်၊ ကားလဲပြင် အကုန်လုပ်သည်။ တိုက်ယာဉ်ကို သူဘဲ မောင်းပေးမည်ဟုဆိုသည်။ တပ်ရင်းမှူးကို တင်ပြတော့ ပထမတော့ အင်တင်တင်လုပ်နေသေးသည်။ ရင်းမှူး ဒုမှူးကြီး ဘီလူး (နန်းလီ အသည်းကွဲနေသည်)က စာအုပ်ကြီးသမား။ ရင်းမှူးက မင်းမရှိရင် ငါ့ကားတွေဘယ်သူပြင်ပေးမှာလဲဟုပြောသည်။ ကိုဖောက အဘ ကျွန်တော့ကောင်လေးတွေက စိတ်ချရပါတယ်ဟုပြောမှ မောင်းပေးလိုက်ကွာဟု အမိန့်ပေးလိုက်သည်။ အဲဒါနဲ့ ယာဉ်မောင်း လိုသည့် ပြဿနာ ပြေလည်သွားသည်။ အခုတော့ ဖောကြီး ယနေ့အတွက် ဒုတိယ အခေါက် လူနာတွေသွားပို့နေပြီ။ တကယ် အရေးကြုံလာသည့် အချိန်တွင်တော့ မည်သည့်ကျောင်းက ဆင်းသည်ဖြစ်စေ ညီအစ်ကို စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာတော့သည်။
နေ့လည်ခင်းရောက်တော့ လူနာတွေ ထပ်ရောက်လာသည်။ သူ့ရှေ့မှာ စစ်သည်တစ်ယောက် ဒဏ်ရာကနေ သွေးတွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်လျက် လှဲလျောင်းနေသည်။ ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ ဆေးတပ်ကြပ်ကြီး နန္ဒ။ ဘယ်ဘက်ပုခုံးနှင့် အစာအိမ်တို့ကို လက်နက်ကြီးအစမှန်ထားသည်။ ဖြစ်ပုံက နံနက်စောစောကတည်းက ဆရာကြီးနန္ဒက ရှေ့ပိုင်းတွင် ရင်ဆိုင်နေရသော တပ်ခွဲများ အထိသွားကာ လူနာကောက်သည်။ အဲဒီ အချိန်မှာဘဲ ရန်သူ၏ တန်ပြန်ထိုးစစ်စသည်။ စစ်သည်အချို့က ဒဏ်ရာရကာ ရှေ့တွင် Pinned down မိနေသည်။ အဲဒါကို နန္ဒက သူ့ MA –3Mark4ဖြင့် ပစ်တက် တက်ရင် လူနာများကို ဆွဲထုတ်ရန် ကြိုးစားသည်။ ကြိုးပမ်းနေစဉ်တွင်ပင် လက်နက်ကြီး ကျည်များက ထပ်မံကျရောက်ကာ နန္ဒကိုပါထိတော့သည်။ သူ့ရဲဘော်စိတ်ကတော့ ချီးကျူးစရာပင်။
ရဲနောင်လည်း နန္ဒ၏ ဒဏ်ရာများကို သွေးတိတ်စေရန် အတော်ပင်လုပ်ရသည်။ Drip line ကတော့ ထည့်ထားပြီးပြီ။ သို့သော် သွေးကမပေးနိုင်။ သူ့ ပုခုံးက ဒဏ်ရာကို အာရုံစိုက်နေစဉ်ပင် အစာအိမ်နေရာက သွေးများ ပိုမိုထွက်လာပါတော့သည်။ အဲဒါနဲ့ ရဲနောင်လည်း အစာအိမ်ဘက်ကို အာရုံပြောင်းလိုက်တော့ ပုခုံးက သွေးထွက်လွန်လာသည်။ သွေးတိတ်စေရန် အချိန်ကိုလုရင်း အသည်းအသန် ကြိုးစားနေရသည်။ အသက် အန္တရာယ်ကလည်း ပို၍ ပို၍ စိုးရိမ်လာရသည်။
သူနာတင် တိုက်ယာဉ်လည်း ပြန်လာနေသည်မှာ ခရီးတစ်ဝက်သာရောက်သေးသည်။ သူ့အနေဖြင့် မည်မျှပင် ကြိုးစားသော်လည်း ဆရာကြီး၏ အခြေ အနေမှာ မတိုးတက်လာသည့် အတွက် စိတ်ဓာတ် တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာသည်။ အော် သူတို့ချစ်ရသော ဆရာကြီးကို စွန့်လွှတ်ရတော့မှာပါလား။
နန္ဒက နာကျင်မှု ဝေဒနာကို ခံစားနေရပေမယ့် သူ့မျက်နှာ အမူအယာကို ဖတ်နိုင်လောက်အောင်ပင် သတိကောင်းကောင်းရနေသည်။
“ဗိုလ်ကြီး ကျွန်တော့်ကို ပစ်မထားပါနဲ့ဗျာ။ အိမ်မှာ မိန်းမရယ်၊ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော့် မိဘတွေကျန်နေသေးတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်ကို တတ်နိုင်သလောက်တော့ ရအောင်လုပ်ပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော် အသက်ရှင်မှာပါဗျာ။”
သူ့စကားတွေက ရဲနောင်၏ ကျနေသော စိတ်ဓာတ်ကို မြှင့်ပေးလိုက်သလိုပင်။
နာကျင်မှုဝေဒနာများဖြင့် အသက်လုနေသော သူတစ်ဦး၏ ပြင်းပြသော ဆန္ဒက သူ့ကို လှုပ်နိုးလိုက်သည်နှင့် မခြား။
ရဲနောင် အတွက်တော့ သူ့ဆရာကြီး အသက်ရှင်ဖို့ကလွဲပြီး အခြားဘာမှ အရေးမကြီးတော့သလို ရုတ်တရက်ခံစားလိုက်ရသည်။
ပုခုံးဒဏ်ရာကသွေးတိတ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း အစာအ်ိမ်က သွေးတွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်နေသေးသည်။ သွေးကြောကဖမ်းမရသေး။ သူလဲ ဆေးခန်းရွက်ဖျင်တဲ အတွင်း မျက်လုံးတစ်ချက် ဝေ့ကြည့်လိုက်ရင်းက သွေးတိတ်သွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲဟု တွေးလိုက်သည်။
လူနာခုတင်ပေါ်တွင်ခင်းထားသော စောင်ကြား တစ်ကိုတွေ့လိုက်သည်နှင့် သူလည်း အကြံရသွားသည်။ စောင်ကြားကို ဆွဲယူ၊ နန္ဒ ခါးလောက်မှနေပြီး တတ်နိုင်သလောက်တင်းနေအောင် ချည်လိုက်သည်။
မျက်လှည့်ပြလိုက် သလားပင် အောက်မေ့ရသည်။ ထွက်နေသည့် သွေးတွေ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ရပ်သွားတော့သည်။
ကျောင်းတုန်းက သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများနှင့် ကိုးကားစရာ စာအုပ်ထူထူများထဲတွင် ဤလို ပြုလုပ်ရမည်လို့တော့ ရေးမထား။ သို့သော် ဆေးပညာတွင် “Never” ဆိုသည့် စကားလုံးမရှိ။ ဒီနေ့မှန်နေတာတွေက နောက်နေ့တွင်မှားချင်မှားနေနိုင်သလို ဒီနေ့မှားနေတာတွေကလည်း နံနက်ဖြန် မှန်ချင်မှန်နေနိုင်သည်။ ယနေ့တော့ ကံကြမ္မာက သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဘက်တွင်ရှိနေသည်။ ဒီနေ့သူ့အပျော်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် မေ့ရနိုင်တော့မည်မဟုတ်တော့။
မရှေးမနှောင်းမှာဘဲ သူနာတင်တိုက်ယာဉ် ဆိုက်ရောက်လာသောကြောင့် နန္ဒကို သူကိုယ်တိုင်ပင် ထမ်းစင်ဖြင့်ထမ်းကာ တိုက်ယာဉ်ပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။ ဖောကြီးကိုလည်း လမ်းခရီးတွင် ဂရုတစိုက်မောင်းပေးရန်လည်း မှာလိုက်ရသေးသည်။
ရဲနောင်တို့၏ ဆရာကြီး နန္ဒတစ်ယောက်တော့ အသက် အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်ကာ သူချစ်သော မိသားစုနှင့် ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ သူ၏ အသက်ကို ပဓာနမထားဘဲ မိမိစစ်သည်များကို ရန်သူ့လက်မှ ကယ်တင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့မှု အတွက် ဒုတိယအရာခံဗိုလ်/ခွဲစိတ်လက်ထောက် အဖြစ် စစ်မြေပြင် အဆင့်တိုးပေးခြင်းခံရပြီး သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင် တံဆိပ်ချီးမြှင့်ခံရပါသည်။ သူရဲကောင်းများစွာထဲမှ တစ်ယောက်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ကြုံလိုက်ရခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
နောင်သူနဲ့ဆုံတိုင်း ဆရာကြီး နန္ဒပြောလေ့ရှိသည်က "ဗိုလ်ကြီးနဲ့ စောင့်ကြားပေးတဲ့ အသက်ဘဲရှိပါတော့တယ်" ဟူ။ ဟုတ်သည်လေ၊ငွေကြေးအရ တန်ဖိုး အနည်းငယ်သာရှိသော စောင်ကြားလေးတစ်ထည်က အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော လူတစ်ဦး အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်ဘဲ။
ဤ အဖြစ်ကို ကြုံတွေ့ရပြီးနောက် ရဲနောင်သိလိုက်ရသည်ကား လူတစ်ဦး၏ သေခြင်း၊ ရှင်ခြင်းကို တစ်စုံတစ်ခုသော အရာကား လွှမ်းမိုးထားသည်ဆိုသော အချက်ပင်။ ကံကြမ္မာပင်လော၊ မေတ္တာတရားပင်လော၊ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ပင်လော။ သူမသိနိုင်ပါ။ သို့သော် သူအတွက်ရလိုက်သည့် သင်ခန်းစာကတော့
“လူနာ အပေါ်တွင် နည်းနည်းလေးမှ လက်မလျှော့လိုက်ပါနှင့်။”
(ဝန်ခံချက်။ Maj. Deshwal ၏ The Higher Force အား ကျောရိုးယူပြီး အနာဂတ်တွင် ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့နိုင်သည့် အခြင်းအရာများနှင့် ဆက်စပ်ကာ မြန်မာမှုပြုထားပါသည်။ လက်ရှိတွင် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမရှိသေးသော ယန္တရားတင်ခြေလျင်တပ်များကို ထည့်သွင်းထားရခြင်းမှာ အနာဂတ်တွင် Mechanized Infantry များ ဖွဲ့စည်းပေးစေချင်သော ဆန္ဒတစ်ခုသာရှိပါသည်။ ခင်မင်ရသော မိတ်ဆွေများ၏ အမည်များအား အသုံးပြုထားခြင်းအား နားလည်ပေးစေချင်ပါသည်။)
အပိုင်း ( ၁ ) အားဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်
အပိုင်း ( ၂ )အားဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်